မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: 2009
ဒီအခြေအနေမှာ- မိမိလူမျိုး-မိမိတိုင်းပြည်ကို အရှက်ကွဲရခြင်းက လွတ်မြောက်လိုသူတိုင်းက ယုတ်မာရမ်းကား နေသူအားလုံးကို ရတဲ့ နည်းနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းတော်လှန်ဘို့ လိုပါတယ်။ ယုတ်မာရမ်းကားမှုကို လွှတ်ပေးထားရင် သို့မဟုတ် မသိကျိုးကျွံပြုထားရင် အဲ့ဒီလူဟာ မိမိ တိုင်းပြည် မိမိလူမျိုးအတွက် တာဝန်မကျေ ဖြစ်ရပါမယ်။ မိမိတိုင်းပြည် မိမိလူမျိုးရဲ့ အရှက်သိက္ခာကို မစောင့်ရှောက်သူ- သို့မဟုတ် တစ် ကိုယ်ကောင်းဆန်သူ ဖြစ်ရပါတော့မယ်။အချို့ကလည်း- တဘက်မှာ လူကြီးလူကောင်းဟန်ဆောင်တယ်။ နောက်တစ်ဘက်မှာ သူ့နှလုံးသားက အမုန်းရောဂါကို မကုသနိုင်ဘူး- ဒီတော့ ဗြောင်မိုက်- ဗြောင်ရမ်းတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို မထောက်ခံသလိုနဲ့- အမည်မပေါ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးနည်း စနစ်တွေကို သုံးပြီး မိမိနဲ့ အယူမတူသူတွေ၊ လူမျိုးနွယ် အငယ်တွေ-ဆန့်ကျင်မုန်းတီးရေး စာတွေ ဖြန့်ချီပါတော့တယ်။
သူတို့ လုပ်တာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘူး။ သူတို့မုန်းတဲ့ လူမျိုး သူတို့မုန်းတဲ့ ဘာသာဟာလည်း ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျက်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာက သိနေတယ်။ စာတတ်သူတိုင်း- အမြင်မှန်ရှိသူတိုင်း သိနေတယ်။ ဒါပေမယ့်- လူတစ်ဘက်သားကို အခြောက်တိုက် မုန်းတတ်တဲ့ အကျင့်- မဟုတ်မတရား ပုတ်ခတ်စော်ကား
၀ါဒဖြန့်တတ်တဲ့ အကျင့်- တွေ မြန်မာလူမျိုးထဲမှာလည်း ရှိပါကလား ဆိုတဲ့ အဖတ်ဆယ်မရနိုင်တဲ့ သိက္ခကျမှုဒဏ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးခံရပါတော့မယ်။
Posted by Ordinary person at 4:26 AM No comments:
Labels: About Racist
ဒီဖြစ်ရပ်မှန် “လူမျိုးခွဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်” ဆောင်းပါးတပုဒ် ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာ တစ်နှစ်လောက်ကြာပါပြီ။
ဒီဆောင်းပါးမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးမယ်။ တယောက်ယောက်နဲ့ တယောက် မမုန်ကြေး။ အငြိုးအတေးတွေးမထားကြေး။အဲဒီ ဆောင်းပါရဲ့ comment တွေထဲမှာ တစ်ချို့တွေက ဘယ်လို့ရေးခဲ့သလဲ ဆိုတော့ “မြန်မာများ မျိုးချစ်စိတ်ရှိသင့်တယ်။ အမိမြေကို ချစ်သင့်တယ်” လို့ ပြောထားပါတယ်။
ကျွန်တော်၏ အမြင်မှာတော့ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစွန်းတော့ မရောက်ပါစေနဲ့ သတိပေးချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဟစ်တလာ လည်း အင်မတန်မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။ သူ့လူမျိုးကို သူချစ်လွန်းလို့ ဂျာမန်လူမျိုးတွေသာ ဤလောကမှာ အကောင်းဆုံး အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ ဆိုပြီး လူမျိုးရေးသန့်စင်တဲ့ အနေနဲ့ သူ့နိုင်ငံက ဂျူးလူမျိုးတွေ သိန်းနဲ့ သန်းချီပြီး အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့ သတ်ခဲ့တာပဲ။ “အလယ် အလတ်လမ်းစဉ်သာလျှင် အကောင်းဆုံး”လို့ ဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတာလည်း ရှိတာပေါ့။ အလည်အလတ်လောက်ပဲရှိပါ လို့ပြောချင်တယ်။ တဖက်စွန်းရောက်သွားရင်တော့ အလကားနေရင်း တခြားလူမျိုးတွေကို မုန်းနေပြီး ဟစ်တလာ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
နောက် comment တစ်ခုက ဘာပြောသလဲဆိုတော့ သားသမီးတွေ အိမ်ထောင်းရေး အတွက်ဆိုရင် လူမျိုးကွဲတွေကို မယူဖို့၊ လူမျိုးတူ ဘာသာတူကိုသာယူဖို့ သေသေချာချာဆုံးမရမယ်လို့ ရေးထားတယ်။ တစ်ခုမေးချင်တယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ သမီးကို ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး Bill Gates ရဲ့ သားတို့၊ ဟောလိဝုဒ်မင်းသား လီယိုနာဒိုတို့၊ အိမ်သာ မစင်အိုးကို ရွှေချတဲ့ အထိ ချမ်းသာတဲ့ ဆော်ဒီနိုင်ငံက အိမ်ရှေ့မင်းသား တို့က နှစ်နှစ်ကာကာ မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်ပြီးလို့ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီနဲ့တင်တောင်းပြီး (ဆောရီး FEC သန်းနဲ့ချီပြီး) လက်ထပ်ပါရစေလို့ လာတင်တောင်းတယ်ဆိုပါစို့။ လူမျိုးမတူ၊ ဘာသာမတူလို့ဆိုပြီး မာနာကြီးတခွဲသားနဲ့ သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းကိုခွဲလိုက်မှာလား။မလိမ်နဲ့နော်။ မှန်မှန်ဖြေ။
ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားတာကို ရိုးရာအမွေ ထိန်းသိမ်းတယ်လို့ နာမည်ကောင်းမတပ်လိုက်ပါနဲ့။ ဥပမာ - မြန်မာရိုးရာ သီချင်းတွေ၊ တူရိယာကို မြတ်နိုးတာ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုထိန်းသိမ်းတာက ရိုးရာကို ထိန်းတာအစစ်။ ဥပမာ - တဆွေလုံးတမျိုးလုံး ကရင်သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲပေါင်းလာတာ။ ရှမ်းဆိုရင် သူငယ်ချင်းအဖြစ်မပေါင်းဘူး။ မတူဘူး မတန်ဘူး။ ဆိုတာမျိုးတွေက လူမျိုးရေးခွဲတာတွေပါ။
လူတယောက်ဟာ မွေးတည်းက ကုလားလူမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်မယ် အဲဒါ သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ သူဖန်တီးယူထားတာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး အဲဒီလူဟာ ကံကြမ္မာရဲ့ လှည့်ကွက်ကြောင့် မတော်တဆ မြန်မာမျိုးတယောက်ကို ချစ်မိတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒါကို မိဘတွေက ဒေါကန်တယ်။ ကံတရားကြောင့် ဖြစ်လာတာကို တရားသဘောနဲ့လက်ခံမှာလား။ လူမျိုးကွဲပေမယ့် စိတ်နှလုံးသဘောထားကောင်းတဲ့ လူကို တရုတ်ဖြစ်လို့ ကုလားဖြစ်လို့ဆိုပြီး ဗလာသက်သက်ကြီး မုန်းနေမှာလား ဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ အဲဒီလူကရော တဖက်မိဘတွေ ကျေနပ်အောင်ဘယ်လို့လုပ်ပေးရမှာလဲ။ သူမိဘတွေဆီသူသွားပြီး ခင်ဗျားကြီးက ဘာလို့ ကုလားကြီး/တရုတ်ကြီးဖြစ်နေရတာလဲ လို့ ရန်တွေ့အပြစ်တင်ရမှာလား။
တကယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရော ကုသိုလ်ကောင်းမှုတချို့ကြောင့် နောင်ဘ၀မှာ လူဘ၀တော့ ပြန်ရပါရဲ့ ဒါပေမယ့် အရှေအလယ်ပိုင်းမှာ ကုလားအဖြစ်မွေးလာမယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ ပေါက်ဖော်လေးအဖြစ် ပြန်မွေးလာမယ်ဆိုရင်။ အဲဒီအခါမျိုးကျရင် ရလာမယ် ကိုယ်လူ့ဘ၀ အသစ်ကို လက်ခံမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာ မဟုတ်လို့ဆိုပြီး မုန်းနေမှာလား၊ မြန်မာပြည်မှာ လူပြန်မဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဓါတ်ကျ အားငယ်နေမှာလား ဆို ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါ။
ဒါနဲ့နေပါဦး။ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဘာလူမျိုးလဲ။ အထက်အညာမှာမွေးတဲ့ ဗမာလူမျိုးလို့ထင်ရင် မှားလိမ့်မပေါ့။ ပိဋ္ဋိကဒ် ၃ပုံနဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ အရတော့ ဗုဒ္ဓဂေါတမဟာ ယခင်က ကောသလပြည် လို့ခေါ်ပြီး ယခု နီပေါနိုင်ငံလို့ ခေါ်နေကြတဲ့ ကုလားနိုင်ငံက အိမ်ရှေ့မင်းသားဘ၀ကနေ ဘုရားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ( မယုံလျှင် နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သွား၍ ကျမ်းဂန်တတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို မေမြန်းကြည့်ပါ။)
မရိုမသေပြောရမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ နီပေါနိုင်ငံက ကုလားလူမျိုး နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘာလို့များ နီပေါနိုင်ငံက တိုင်းတပါးသားကို ကိုးကွယ်ပြီး သူဟောခဲ့တရားတော်တွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြပါသလဲ။
အဓိကဆိုလိုချင်တာကတော့ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားဆိုတဲ့ ပညတ်ချက်တွေ ဖယ်ရှားပြီး လူသားတဦးနဲ့ တစ်ဦးချစ်ခင်လေးစားကြရင် ကမ္ဘာမြေကြီးပိုမို ငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ။
myanmarspac.com မှကူးယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
This post is supported byaBuddish friend.
Posted by Ordinary person at 6:18 AM 1 comment:
Was JESUS (Prophet Isa A.S) Born On December 25th?
The month of December in the northern hemisphere, and in the land of Palestine where Jesus was born, is the winter season when the climate is rainy and very cold. According to the Song of Solomon 2:11 and Ezra 10:9, 13, during the winter the shepherds kept their flocks in barns to be protected from the rain, cold and wind. Now let us see what the Bible says about the season when Jesus was born.Luke 2:8 says: "And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping 'watch over their flocks by night." This verse obviously proves that at the time of the birth of Jesus the shepherds were in the field tending their flocks at night. It is impossible for the flocks to be in the field in the month of December when the temperature was at it lowest of the year. According to The Geography of the Bible by Denis Baly, the last week of December corresponds to the tenth month of the Jewish sacred calendar known as Tebeth, when there is frequent frosts and occasional snow florishes in Jerusalem. (Aid to Bible Understanding, N.Y. 1971, P. 1580). Therefore, at this time the shepherds corral their flocks in order to protect them from the rain and cold weather. This chronological fact proves that Jesus was not born in winter.
The second proof that Jesus was not born on December 25th is Luke's narration that Jesus was born inamanger because there was no room in the inns. Every year the Jews celebrate the Feast of Trumpets, the Day of Atonement and the Feast of Tabernacles in the seventh Hebrew month of Tishri. These festivals are observed in Jerusalem and its outskirts towns in the autumn season. At this time, Jerusalem and its surrounding towns are overcrowded with Jews who come to celebrate, that all inns are filled with people. Mary and Joseph as Jews, used to go to Jerusalem every year to observe these Holy Days. Luke 2:41 says that "His (Jesus) parents went to Jerusalem every year." Nevertheless, every Jew must pay taxes in the month of Tishri in the early autumn.
Here we have the second proof that at the time of taxation Joseph took Mary with him to Bethlehem. We read in Luke 2:5-7 that Joseph went to Bethlehem "with Mary his espoused wife, being great with child. And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her first born son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him inamanger; because there was not room for them in the inn." Mary and Joseph could not getaroom in the inn because all inns were filled with Jews who had come to Jerusalem and its surrounding towns by the thousands in order to pay taxes and observe the Holy Days which are in the month of Tishri at the end of the civil year in the early autumn. It was at this time Jesus was born in the early autumn and not in December which is in winter.
In the days of Jesus, the Jewish priests continued to follow the course or division of serving the Temple of the Lord which was set up by David. Every priest used to serve the Temple by turn onceaweek, day and night. There were 24 courses, each named after the priest of the descendant of Aaron. Each priest was assigned by David to serve the Temple foraone-week period every six months. (see I Chronicle 24: 7-24). Therefore, it took 24 weeks to conclude the 24 courses of the service of the priests in the Temple of the Lord. The first course known as Jehoiarib began on the Sabbath day in the month of Nisan of the Hebrew calendar. Nisan is in the spring season. The course of Maaziah is the twenty forth and the last course. The first course Jehoiarib is repeated in the week of the civil year. Therefore the courses came twiceayear during 48 weeks. After knowing this division of the courses, we can know when John the Baptist was born, so that we can easily know the birthday of Jesus.
When Zacharias (Prophet Zacharias A.S) was in the Temple of the Lord, Gabriel, the Angel of God came to give him the glad tidings of the son to be born by his wife. "There was in the days of Herod, the king of Judea,apriest named Zacharias, of the course of Abia; and his wife was of the daughter of Aaron, and her name was Elisabeth."(Luke 1:5). This verse shows that when Zacharias was given the glad tidings of the son to be born, he was serving the Temple of the Lord in the course of Abia. I Chronicles 24:10 shows that Abia (or Abijah) was the eighth course. This means that it was in the ninth week (including the first week of Passover) after the beginning of the first month of Nisan. Therefore, he was serving between lyar 27 and Sivan5of the Hebrew calendar (June 1 to June 8) after calculating from April 6,5B.C., which was on Sabbath of the month of Nisan
The human gestation period is about9months and 10 days. Therefore, if we calculate from the time that Zacharias was given the glad tidings of the son to be born, up untill the child John (Prophet Yahya A.S) was delivered, we get March 27 (about the first of Nisan) as the birthday of John the Baptist. Now, Jesus was6months younger than John, because in the sixth month" after Zacharias was given the glad. tidings, the angel Gabriel was sent by God to Mary to tell her that she "shall conceive in thy womb, and bring forthason, and shall call his name JESUS." (Luke 1:26,31). If we add6months from the birthday of John (i.e. about March 27/ Nisan I) we get the birthday of Jesus Christ about mid-September (first of Tishri), which was in early autumn. This is the third proof that Jesus was not born in December!
Origins in Paganism
The fact that Jesus was not born on December 25th and that the celebration of Christmas has its origins in paganism and it was introduced in Christianity in the fourth century is admitted by the Roman Catholic Church itself. The Catholic Encyclopedia, 1911 edition, under the heading, "Christmas" says: "Christmas was not among the earliest festivals of the Church... the first evidence of the feast is from Egypt... Pagan customs centering around January gravitated to Christmas."
The Encyclopedia America also confirms this fact: "The celebration was not observed in the first centuries of the Christian church...afeast was established in memory (of Jesus' birth) in the 4th century. In the 5th century the Western church ordered the feast to be celebrated on the day of the Mithraic rites of the birth of the sun and at the close of the Saturnalih (resulting in the December 25 date)... Most of the customs now associated with Christmas... were pre-Christian and non-Christian customs taken up by the Christian church. Saturnalia,aRoman feast celebrated in mid-December, provided the model for many of the merry making customs of Christmas." (1956 ed., vol.6, P.622).
Why should one celebrate Christmas when it is quite clear that from the Bible and. history that Jesus was not born on December 25th? Any true follower of Jesus Christ will refrain from observing paganic customs and beliefs which have been introduced into the pure teachjngs of Prophet Jesus. It is known that besides the Christmas and Easter holidays which have been introduced to Christianity by paganism, other beliefs such as the trinity, sonship and crucifixion of Jesus are also of pagan origin.
Source: Echo of Islam
Now x'mas is likeafashion among young generation.
My message is to give that, general knowledge is very important for human life.
Posted by Ordinary person at 3:47 PM No comments:
အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရတ် အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြောတာဟာ အလွန်ပဲ နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။ သူဟာ စကားပြော ကောင်းလွန်းလို့ အချို့က သူ့ကို ပြောချည်း ပြောနေတယ် ဘာမှလည်း ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။
ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့က အိုဘားမားဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့မှာ အာရပ်နဲ့ မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာကို ဦးတည်တဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ခုကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းဟာ အလွန် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့အတွက် အဲဒီမိန့်ခွန်း ပြောတဲ့အချိန်မှာ သူသုံးခဲ့တဲ့ နည်းစနစ်တွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြောင်းအရာပိုင်းကို မသုံးသပ်ချင် ပါဘူး။ နည်းစနစ်ပိုင်းကိုပဲ သုံးသပ်ချင် ပါတယ်။အောက်က သုံးသပ်ချက် အားလုံးဟာ ကျွန်တော့် အမြင်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည့်စုံမှု ရှိမှာ မဟုတ်သလို အားလုံးမှန်တယ် လို့လည်း ယူဆလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချင့်ချိန် တွေးတောနိုင်ပါတယ်။
ပရိသတ်နဲ့ တသားတည်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောခြင်း
အိုဘာမားဟာ သူနဲ့ အာရပ်တွေ တသွေးတည်း တသားတည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောကြားပြီး ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ အိုဘားမားရဲ့ “ဆလမ် မာလေးကွမ်း” ဆိုတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားအပြီးမှာ သူဟာ ပရိသတ်ရဲ့ သြဘာပေးမှုကို မိနစ်ဝက်ကျော်အောင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ တစ်လျှောက်မှာ သူ ထုတ်မသုံးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အလယ်နာမည် ဟူစိန်ကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ ထုတ်သုံးပြီး သူ့ကိုယ်သူ ဘာရတ် ဟူစိန် အိုဘားမား အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဟာလည်း သူရဲ့ နည်းပရိယာယ် တစ်ခုပါပဲ။ သူ့ အဖေရဲ့ ကင်ညာနိုင်ငံက ဆွေမျိုးတွေမှာ မွတ်ဆလင်တွေ ပါဝင်နေတာ၊ သူ့ရဲ့ ကလေးဘဝကို မွတ်ဆလင် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့တာ၊ ရှီကာဂိုက မွတ်ဆလင် အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျင်လည်ခဲ့တာ တွေကို ပြန်ပြောခြင်းဟာလည်း သူဟာ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ မစိမ်းကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြသွားတဲ့ နည်းပရိယာယ် တစ်ခုပါပဲ။
အမှန်ကို ထုတ်ဖော် ချီးကျူးခြင်း
လူတိုင်းက မြှောက်ပြောတာကို မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ထုတ်ဖော် ချီးကျူးပြောဆို တာကိုတော့ လူတိုင်းက သဘောကျပါတယ်။ အိုဘားမားဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းထဲမှာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပြန်လည်ထွန်းကားလာတဲ့ခေတ် (Renaissance) မတိုင်ခင်က အချိန်တွေကို ပြန်လည်ထုတ်ဖော်ပြီး ချီးကျူးပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က အနောက်တိုင်းမှာ နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေ နှောင့်နေး နေခဲ့ပေမယ့် မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာမှာ ဆေးပညာ၊ အက္ခရာသင်္ချာ၊ စက္ကူနဲ့ ပုံနှိပ်ခြင်း အတတ်ပညာ စတာတွေမှာ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ပြန်လည် ထုတ်ဖော် ချီးကျူးခြင်းနဲ့ သူ့ကို သဘောကျအောင် ဆွဲဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ပထမဆုံး အသိအမှတ် ပြုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဟာ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ မော်ရိုကို ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း သတိတရ ထုတ်ဖော် ပြောခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ အမေရိကန်မှာ ပျမ်းမျှ အမေရိကန်တွေထက် ပိုပြီး လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားတဲ့ အကြောင်းကို ထုတ်ဖော် ပြောခဲ့တာဟာလည်း သူ့ရဲ့ ပစ်ချက် တစ်ခုပါပဲ။
လူတိုင်းသိသော အမှန်တရားကို ပြောကြားခြင်း
ဒီမိန့်ခွန်းတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ အိုဘားမားက ပြောပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ မပြောလည်း လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ပြောခဲ့ခြင်းကြောင့် သူ့ကို ရိုးသားတဲ့သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ နားထောင်တဲ့ သူတွေက ထင်မြင်သွားစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အီရတ်စစ်ပွဲဟာ အမေရိကန်ရဲ့ အမှား တစ်ခုလို့ လူအတော်များများ လက်ခံထားပါတယ်။ အိုဘားမား ကိုယ်တိုင် ဆီးနိတ်လွှတ်တော် အမတ်ဘဝက အီရတ်ကို ကျူးကျော်မယ့် ကိစ္စကို ကန့်ကွက်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အဲဒီ ကိစ္စဟာ အမေရိကန် ရဲ့ အလွန် ဖြစ်ကြောင်း သူ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အမေရိကန်နဲ့ အစ္စရေး ဆက်ဆံရေးဟာ အလွန်ခိုင်မာတယ်။ ဖြတ်လို့ မရဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ အဲဒီ အမှန်တရား ကိုလည်း သူ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို လူတိုင်းသိတဲ့ အမှန်တရားတွေကို ဝန်ခံခဲ့ခြင်းအားဖြင့် အိုဘားမားဟာ သူ့ကိုယ်သူ ရိုးသားသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပုံဖော်ခဲ့ပြီး လူတွေကို သူ့ဘက်ပါအောင် ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
အိုဘားမားဟာ မိန့်ခွန်း တစ်ခုလုံးမှာ အကြမ်းဖက်သမား (terrorist) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တစ်လုံးမှ သုံးမသွားပါဘူး။ အစွန်းရောက် ဝါဒီ (Extremist) ဆိုတဲ့ စကားလုံကိုပဲ အစားထိုး သုံးစွဲ သွားပါတယ်။ အိုဘာမားရဲ့ လက်သုံးစကား “ငါဒီနေရာကနေ နှိမ့်ချစွာ ပြောဆိုပါတယ်။” ဆိုတာကို လည်း ထည့်သွင်းပြီး ပြောသွားပါတယ်။
မိန့်ခွန်းပြောတဲ့သူဟာ စာရွက်ကိုင်ပြီး ပြောရင် ကြည့်ရတာ အလွန် အရုပ်ဆိုးသလို နားထောင်နေတဲ့သူရဲ့ ရင်ထဲကိုလည်း ရောက်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အိုဘားမားဟာ မိနစ် ၅၀ ကျော် ကြာတဲ့ မိန့်ခွန်းကို စာရွက် လုံးဝ မကိုင်ဘဲ လက်တန်း ပြောသွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်ဟာ မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ အချိန်တစ်လျှောက်လုံးမှာ စကားနဲ့အညီ လိုက်ပြီး လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးကို ဖွင့်ပြီး ပြောတဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာဟာ သူ့မှာ ပွင့်လင်းမှု ရှိတယ် အားလုံးကို ကြိုဆိုနေတယ် ဆိုတဲ့ အမူအရာ မျိုးပါပဲ။ လက်ညှိုးတစ်ချောင်ကို ထောင်ပြီး လက်ကို တံတောင်ဆစ်အထက်မှာ မြှောက်ထားတဲ့ အမူအရာမှာတော့ သူဟာ သြဇာအာဏာရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြနေပါတယ်။
အိုဘားမားရဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့စကားတစ်ချို့ကို ရွေးထုတ် လိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လတ်တလော အတွေ့အကြုံတွေက သင်ခန်းစာရခဲ့တာက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေးစနစ်ဟာ မခိုင်မာဘူး ဆိုရင် နေရာအနှံ့အပြားမှာ ရှိတဲ့ ကြွယ်ဝမှုတွေကို အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်။ အဖျားရောဂါ အသစ်တစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်မှာ ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် လူသား အားလုံးအတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက နျူးကလီးယားလက်နက် ထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ဆိုရင် နိုင်ငံအားလုံးမှာ နျူးကလီးယား တိုက်ခိုက်ခံရမှု အတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေဟာ တောင်တန်းတစ်ခုမှာ အခြေပြု လှုပ်ရှားတယ် ဆိုရင် သမုဒ္ဒရာ တစ်ဖက်ကမ်းက လူတွေမှာ အန္တရာယ် ရှိတယ်။ ဒါဖာနဲ့ ဘော့စနီးယားမှာ အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေ အသတ်အဖြတ်ခံရတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်တွေကို အစွန်းအထင်း ဖြစ်စေတယ်။ အဲဒါဟာ ၂၁ ရာစုမှာ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကို ဝေမျှ နေထိုင် ကြတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲ။”
“စစ်ပွဲတစ်ခုကို စရတာ လွယ်ပေမယ့် အဆုံးသတ်ဖို့ခက်တယ်။ အခြားလူတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် မြင်အောင် ကြည့်ရတာထက် အပြစ်တင်ရတာက ပိုလွယ်တယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အချက်ကို ရှာကြည့် ရတာက ကိုယ်နဲ့တူညီတဲ့အချက်ကို ရှာဖွေရတာထက် ပိုလွယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကိုပဲ ရွေးသင့်တယ်။ လွယ်ကူတဲ့ လမ်းကို မရွေးသင့်ဘူး။”
Thanks to Ko Zarni for sharing this post.
Posted by Ordinary person at 12:49 AM No comments:
Du'a for Family
Please click the picture to read clearly
Posted by Ordinary person at 11:49 PM No comments:
Muharrma - Islamic New Year 1431 H.
MAY SALAMAT, RAMABAT AND BARAKAT FROM ALLAH (SWT) BE UPON YOU...
Posted by Ordinary person at 3:35 PM No comments:
သူတော်စဉ်များ၏ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော ဆုံးမစကား part1
သူတော်စဉ်များ၏ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော ဆုံးမစကားပေါင်းတစ်ရာ စာအုပ်မှကောက်နှုတ်တင်ပြသည်။
Posted by Ordinary person at 10:20 PM No comments:
Women In Islam - Wives in Islam
Women are vital to the very existence of all humans. After all, men are born from women, not the other way around. Allah the Majestic tells us in the Quran that He has created both men and women, all fromasingle person, Adam, peace and blessings be upon him. From Adam, Allah created his mate (Eve) and from these two Allah brought forth many men and many women.
Allah also tells us he created us all fromasingle soul and from him, brought forth his mate and from these two He created many tribes and nations and made us all different so that we might recognize one another.
Wives in Islam are considered mates to their “other half.” The prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) taught his followers to get married and fulfill and complete the “other half” of their religion or way of life. Marriage is consideredacomplimenting of two halves to each other in Islam. These teachings seemed strange to the revealing attitude toward women at that time.
Atatime when the rest of the world, from Greece and Rome to India and China, considered women as no better than children or even slaves, with no rights whatsoever, Islam acknowledged women’s equality with men inagreat many respects.
“And among His signs is this: that He created mates for you from yourselves that you may find rest and peace of mind in them, and He ordained between you love and mercy. Certainly, herein indeed are signs for people who reflect.” [Noble Quran 30:21]
“The most perfect in faith amongst believers is he who is best in manners and kindest to his wife.” [Source: “Sunnan” of Abu Dawud]
Muslims believe that Adam and Eve were created from the same soul. Both were equally guilty of their sin and fall from grace, and Allah forgave both. Many women in Islam have had high status; consider the fact that the first person to convert to Islam was Khadijah, the wife of Muhammad (peace and blessings be upon him), whom he both loved and respected. His favorite wife after Khadijah’s death, Ayshah, became renowned asascholar and one of the greatest sources of Hadith literature.
Many of the female Companions accomplished great deeds and achieved fame, and throughout Islamic history there have been famous and influential scholars and jurists.
We might also mention that while many in the West criticize Islam with regard to the treatment of women, in factanumber of Muslim countries have had women rulers and presidents. To nameafew: Turkey; Bangladesh and Pakistan.With regard to education, both women and men have the same rights and obligations.
This is clear in Prophet Muhammad’s (peace and blessings be upon him) saying:
“Seeking knowledge is mandatory for every believer.” [Hadith (saying of Muhammad (peace and blessings be upon him) collected by Ibn Majah] This implies men and women.
Before marriage,awoman has the right to choose her husband. Islamic law is very strict regarding the necessity of having the woman’s consent for marriage. The groom givesamarriage dowry to the bride for her own personal use. She keeps her own family name, rather than taking her husband’s. Asawife,awoman has the right to be supported by her husband even if she is already rich. She also has the right to seek divorce and custody of young children. She does not return the dowry, except inafew unusual situations.
Despite the fact that in many places and times some Muslims have not always adhered to all or even many of the foregoing in practice, the ideal has been there for 1,400 years, while virtually all other major civilizations did not begin to address these issues or change their negative attitudes until the 19th and 20th centuries, and there are still many contemporary civilizations which have yet to do so.
The prophet (peace and blessings be upon him) ordered his companions never to mistreat their wives. He scolded them and admonished them, saying “How could you treat them like animals in the day and then want to be intimate with them at night.”Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said it all inasimple sentence,“The best of you are the best to their wives; and I am the best to my wives.”
Many times i have seen brothers are very good in all acts, well educated…but very bad with there wifes….
We must remember how we treat our mates is also test, and if you failed then you will be punished. Just like school & college exams….You have to pass in all Subject….If you failed in one subject, you will not enter in higher class. Same applied in here…and don’t think just fail in this test will not effect….Prophet Adam was out of Jannah becoz he disobeyed Allah’s one Order..Only One. Where you will go….???? by hurting your wifes, you are disobeying commands of Allah and order of Prophet Muhammad(pbuh), and will such peoples Enter Jannah ????? Think it.
….YOU STILL HAVE TIME…
“Be careful…. if you makeawomen cry because
Allah the most high counts her tears.
and next to his heart to be loved.
”May Allah forgive me if I’m wrong at any place, Ameen.
Special thanks to sister Ma Ma Lay.
Posted by Ordinary person at 1:50 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 11:38 PM No comments:
Internet Email, Gmail များတွင် တွေ့သိနေရသော အစ္စလာမ့်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာ ယိုးစွပ်တင်ပြချက်များ ကြောင့် မွတ်စလင်မ်လူငယ်များမှားယွင်းစွာ သုံးသပ်၊ ဆုံးဖြတ်၊ မပြုလုပ်မိစေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ ယင်းစွပ်စွဲစော်ကားမှုများသည် (၁) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပေါ်၊ (၂)တမန်တော်မုဟမ္မဒ်(ဆွ)အပေါ် (၃) အစ္စလာမ်နှင့် (၄) မွတ်စလင်မ်ထုအပေါ်တွင်ပြုလုပ်ထားကြခြင်းဖြစ်ရာ အလ္လာဟ်အရှင်ကိုဆဲဆိုထားသောစာသားများပါရှိနေသဖြင့် ထာဝရ ဘုရားကို ယုံကြည်မှုရှိသောခရစ်ယာန်နှင့် ဖန်ဆင်းရှင်ကို ယုံကြည်သော ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များရေးသားချက်မဟုတ်နိုင်ကြောင်း သာမန်ကောက်ချက်ချမိနိုင်ပါသည်။
အမှန်ဆိုရသော် ဖန်ဆင်းရှင်ကို လက်မခံသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလည်းမည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လွယ်ကူစွာပင် သိနိုင်ပါသည်။အကြောင်းမှာ -ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးသည် ငါးပါးသီလကို အထူးစောင့်ထိန်းရပါသည်။ငါးပါးသီလထဲတွင် မုသားပြောခြင်းကို ရှောင်ကြည်ရခြင်း သည်လည်းတစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ရာ "တမန်တော်မြတ်၌ ဇနီး အယောက် (၆၁)ယောက်ရှိသည်ဟုနာမည်များဖြင့် လုပ်ကြံရေး သားမှုများပါဝင်နေသဖြင့် " ငါးပါးသီလကိုကျိုးပေါက်ရာရောက်စေသဖြင့် စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတစ်ဦးမှာ ထိုအမှုကိုကျူးလွန်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျန်စွပ်စွဲတင်ပြချက်များသည်လည်းမုသားဆင်ထားမှုများသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်၌ကလည်း ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး၊တစ်ပါးသူကိုလည်း လိမ္မာယဉ်ကျေးလာအောင် ပြုပြင်ပေးတတ်သော စိတ်ထားကိုထားတတ်ကြသည်မှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ "သူတစ်ပါးကိုဆုံးမသောနည်းအတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင်လိုက်နာပြုကျင့်ရာ၏။မိမိကိုယ်တိုင် ယဉ်ကျေးပြီးသော်မှ သူတစ်ပါးကို ဆုံးမရာ၏။ မိမိကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမရခြင်းသည် ခဲယဉ်းလှစွာတကား" (ဓမ္မပဒ-၁၅၉)
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်တွင် လူကြီးသူမတို့သည် မိမိတို့၏သားမြေးတို့အားဆုံးမသွန်သင်လေ့ရှိသော စကားတစ်ခွန်း မှာ - "အမိယုတ်က နှုတ်ကြမ်း၍ အဖယုတ်က အမူအယာကြမ်း၏" ဟူ၍ ဖြစ်ရာ မိယုတ်၊ဖယုတ် တို့မှာ နှုတ်၊ အမူအယာကြမ်း သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ကာမိမိမိုက်မဲမှုကြောင့် မိဘများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးရာ ရောက်စေသဖြင့်ဤအပြုအမူမျိုးကို ရှောင်ရှားတတ်သည်ဖြစ်ရကား ယခုကဲ့သို့ယုတ်ညံ့သောစကားများကို ဆိုဝံ့သူတို့မှာ နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ဦးလည်းမဖြစ်တန်ရာပေ။
ယင်းတို့၏ ရေးသားချက်များတွင် ဘာသာရေးရန်တိုက်ပေးခြင်း၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးစိတ်များဖြစ်စေရန် သွေးထိုးပေးခြင်း ဖြင့် ရှုတ်ထွေးမှုများ၊မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်လာအောင် တိုက်ထွန်းထားပေရာ ဤသည်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် လုံးဝညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရပြန်ပါသည်။
"သူတော်ကောင်းသည် သူနှစ်ယောက်တို့၏ညီညွတ်မှုကို ဖျက်စီးတတ်သောကုန်းတိုက် စကားပြောခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်၏။ စိတ်ဝမ်းကွဲသောသူတို့ကိုစေ့စပ်၏။ ညီညွတ်ပြီးသောသူတို့ကို အမြဲညီညွတ်အောင် ကူညီ၏။ ပြောဆို၏။"(မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ ဆဗ္ဗိသောဓနသုတ်)။
သို့ရှိရာ မွတ်စလင်မ်လူငယ်တို့သည် Internet Email, Gmailများတွင်တွေ့နေရသော အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မွတ်စလင်မ်မုန်းတီး ရေး၊၀ါဒဖြန့်စာသားများကို ရေးသားတင်ပြနေသူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရမည်ဟုတွေးမထင်ကောင်းပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးသည် ထိုသို့သော အောက်တန်းကျသည့်အမှုအား ဘယ်နည်းဖြင့်မျှ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထိုသို့ အသိမရှိဘဲနှင့်အထင်မှားမိပါက မိမိ၌ပင် အပြစ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
"အို-ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည်များစွာသောထင်မြင်ယူဆချက်များမှရှောင် ကြဉ်ကြလေကုန်။ ဧကန်အမှန် အချို့သောထင်မြင်ယူဆချက်များမှာ အပြစ်ပင်ဖြစ်ပေသည်။" (ကုရ်အာန် ၄၉း၁၂)
(၁) အစ္စလာမ်တွင် စစ်ပွဲများကို ခွင့်ပြုထားရခြင်း မက္ကာဟ်သားမုရှရီက်တို့၏ စော်ကားမှု၊ အနိုင်ကျင့်မှု၊ ဖိနှိပ်မှုများကိုတမန်တော်မုဟမ္မဒ် (ဆွ)ကို လက်ခံခဲ့ကြသော သူတို့မှာ ဒလစပ်ခံခဲ့ကြရပြီး၊အလ္လာဟ်ဘက်မှ ပြန်လည်တုံ့ပြန်၍ အခွင့်အရေးမပေးသေးသဖြင့် နင်းပြားဘ၀သို့ရောက်ခဲ့ရပုံမှာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင်တို့အတွက် ကရုဏာသက်ဖွယ်တစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ရပါသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစ္စလာမ်သည်မွန်မြတ်မှန်ကန်သော လမ်းစဉ်အယူဝါဒဖြစ်ကြောင်းကို လက်တွေ့ပြသရန်ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်ရကား အစတွင် မေတ္တာတရားကို ကိုယ်ထင်ပြဖို့ငုံ့ခံခိုင်းခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်မှ သစ္စာတရားကို ခိုဝင်ကြဖို့တုံ့ပြန်ခိုင်းပါသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာတွင် စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန် ခွင့်ပြုထားသော်လည်း သဘာဝကျသောသာသနာ၊ လက်တွေ့ဆန်သော သာသနာ၊ လွယ်ကူရိုးရှင်းသော သာသနာ၊ တရားမျှတကိုမျက်ခြေအပြတ်မခံသောသာသနာ၊ မေတ္တာတရားကို အပျိုရည်မပျက်စေသော သာသနာ၊အမှန်တရားနှင့်ယှဉ်သော သာသနာ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ စည်းကမ်းချက်များကိုတင်းကြပ်စွာချမှတ်ထားပါသည်။
"လာရောက်တိုက်ခိုက်သူတို့အား ပြန်တိုက်ကြလေကုန်။" (ကုရ်အာန် ၂း၁၉၁) အစ္စလာမ်တွင် ခုခံစစ် သက်သက်ကိုသာ ခွင့်ပြုထားပြီး ၊ကျူးကျော်စစ်ဟူသမျှကို အားမပေးပါ။ မထောက်ခံပါ။ မပြုခိုင်းပါ။ ဤသို့ တရားသော ခုခံစစ်၊ ပြန်တိုက်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုခဲ့သည့် အချိန်မှာဟစ်ဂျရီ (၂)ခုနှစ်၊ ဆွဖရ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ရာ တမန်တော်သက်တော်(၅၅)နှစ်ရောက်မှသာ ဖြစ်ပါသည် တနည်းဆိုသော် မွတ်စလင်မ်တို့သည် ၁၅နှစ်လုံးလုံး အနိုင်ကျင့်ခံ ဘ၀ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။
"အလ္လာဟ့်လမ်း၌ အသင်တို့ကို တိုက်ခိုက်လာသူတို့အား တိုက်ခိုက်ကြကုန်လော့။သို့ရာတွင် အသင် တို့သည် စည်းဖောက်သူများ မဖြစ်ကြကုန်လင့်။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် စည်းကမ်း၊ ဖောက်ဖျက်သူတို့အား နှစ်သက်တော်မမူပေ။လာရောက်တိုက်ခိုက်သူတို့အား တွေ့ရှိရာအရပ်၌ သုတ်သင်ကြလေကုန်။ အသင်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့ကြသော နေရာမှ အသင်တို့ကလည်း ပြန်လည် နှင်ထုတ်ကြလေကုန်။ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် သတ်ဖြတ်ခြင်းထက်ပင် ပို၍ဆိုးရွားလှ ပေသည်"ကုရ်အာန် (၂း၁၉၀-၁၉၁)
- အလွန်ရိုးစင်းလှသော စည်းကမ်းလမ်းညွှန်ပင် - (က) အလ္လာဟ့်လမ်း၌ လာရောက်တိုက်ခိုက်သူတို့အား ပြန်တိုက်ရန် (ခ) စည်းမကျူးကြရန် (ဂ) ကျူးကျော်သူကို တွေ့ရာအရပ်၌ နှိမ်နှင်းရန် (ဃ) မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သောနေရာမှာ ပြန်လည်နှင်ထုတ်ရန်ဟုသာဆက်တိုက်ပြောထားရာ (၁) မိမိအိမ်၌ မိမိနေသော (၂) မိမိအလုပ်မိမိလုပ်နေသော (၃)မိမိနေရာ၌ မိမိရှိနေသော (၄) မွတ်စလင်မ်တို့အား မကျူးကျော်သော ၊မစော်ကားသော သူတို့အား ဘာတစ်ခုမျှ ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားထားချက် မရှိပါ။ မပါပါ။
အစ္စလာမ်တွင် ခုခံစစ်ကို ခွင့်ပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ "ညှင်းပမ်းမှုလုံးဝ ပပျောက်သွားသည့်အထိ၊ သာသနာသည် အလ္လာဟ့််အတွက်ဖြစ်သည့်တိုင် ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ကြလေကုန်။ သို့ရာတွင် ထိုသူတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းကို ရပ်စဲကြပါလျှင် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သူတို့မှတစ်ပါးအခြားသူများကို ရန်လိုစရာ အကြောင်းမရှိပေ။" (ကုရ်အာန် ၂း၁၉၃) "သာသနာရေး၌ အဓမ္မ စနစ် မရှိစေရ။" (ကုရ်အာန် ၂း၂၅၆) သို့ရှိပေရာ အစ္စလာမ်တွင် စစ်တိုက်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုရာ၌ - (က) တရားသောခုခံစစ်သာ ဖြစ်ရပေမည်။ (ခ) ကျူးကျော်စစ် လုံးဝမဖြစ်စေရ။ (ဂ) စည်းကမ်းမဖောက်ရ။ (ဃ) ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု မရှိစေရ (င) စစ်ပြေငြိမ်းပါက ရန်မလိုရ ဟူသောအချက်များနှင့်အညီသာပြုခွင့်ပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။အစ္စလာမ်သည် ဘာသာအယူဝါဒ မတူသူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။ " အို လူသားအပေါင်းတို့၊ ငါအရှင်သည် အသင်တို့အား တစ်မိတစ်ဖတည်းမှဖန်ဆင်း ပြုလုပ်တော်မူခဲ့သည်။"(ကုရ်အာန် ၄၉း၁၃)
ဤအာယသ်တော်သည် လူသားအပေါင်းတို့သည် ကမ္ဘာအိမ်ထောင်စုကြီးဖြစ်သည်ဟုဖော်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်က ဤအတိုင်းပင်ခံယူထားပါသည်။ "အသင်တို့အား ဘာသာရေး၌ မတိုက်ခိုက်သူများ၊ အသင်တို့အား အိမ်များမှမနှင်ထုတ်သူများအား ကောင်းကျိုးပြုပေး ခြင်းနှင့်တရားမျှတစွာဆက်ဆံခြင်းကို ငါအရှင်မြတ်က မတားမြစ်ပါ။" (ကုရ်အာန် ၆၀း၈) "အသင်တို့သည် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအတွက်အကောင်းဆုံးပေါ်ထွက်လာသူများပင်။" (ကုရ်အာန် ၃း၁၁၀) "ထို မယုံကြည်သူတို့အား ခွင့်လွှတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပြောပါ။သူတို့သည် မကြာမီ သိလာကြမှာပါ။" (ကုရ်အာန် ၄၃း၈၉) "မွတ်စလင်မ်ဟူသည် လူသားတို့အားသူ၏ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သူ၏လက်ဖြင့်လည်းကောင်း ငြိမ်းချမ်းရာရစေကြောင်း ဖန်တီးပေးသူသာဖြစ်၏ "(တမန်တော်မြတ် ၏နောက်ဆုံး ဟဂ်ျမိန့်ခွန်း)
အစ္စလာမ်ကပြဆိုသော အိမ်ထောင်ရေး ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော ဘာသာသာသနာအသီးသီးသည် ကြည်ညိုလေးစားဖွယ်ရာအပေါင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေပါသည်။ ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်းစည်းကမ်းနည်းလမ်းများ ချမှတ်သွန်သင်ထားပါသည်။အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြား ပြသရာ၌ အစ္စလာမ်သည်အပြည့်စုံဆုံးဟု ဆိုရပေမည်။ မည်သည့်အယူဝါဒကမျှ အမျိုးသားသည် ဇနီးမယားဘယ်နှစ်ဦးယူခွင့်ရှိသည်ကိုတိတိပပ ပြောဆိုထားခြင်းကို မတွေ့ရပေ။ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးထမ်းအရသာအိမ်ထောင်သားမွေးပြုကြပြီး တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို အများအားဖြင့်ကျင့်သုံးနေကြပါသည်။
အစ္စလာမ်သည် သဘာဝကျသော သာသနာဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ အမျိုးသားတစ်ဦးအားဇနီးတစ်ယောက်သာ ယူရမည်ဟု ပြောမထားပါ။ ဤသို့သတ်မှတ်ထားပါက အချို့သောသူများအတွက် ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ သို့သော်တစ်လင်တစ်မယားစနစ်သည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ပီပြင်စွာတင်ပြထားသည့်တစ်ခုတည်းသော သာသနာဖြစ်ပါသည်။
အသင်တို့သည် ခိုကိုးရမဲ့ မိဘမဲ့ကလေးများနှင့်ပတ်သက်၍ တရားမျှတမှုအတွက်စိုးရိမ် မကင်းဖြစ်ပါမူ အမျိုးသမီး တစ်ဦး (သို့မဟုတ်)အသင်တို့လက်ယာလက်ကပိုင်ဆိုင်သော ကျွန်မ တစ်ဦးနှင့်ပင် လက်ထပ်ရပေမည်။(ကုရ်အာန် ၄း၃) ဤအာယသ်တော်အား ခွဲခြမ်းစိစစ်သော်-(က) မိဘမဲ့ ကလေးများကို စာနာသနားမှု (ခ) တရားမျှတမှုကိုရှေ့တန်းတင်ခြင်း(ဂ) တစ်ဦးတည်းယူရန် အသားပေးခြင်း (ဃ) ကျေးကျွန်ကို ဂုဏ်ပေးကာသူကောင်းပြုစေမှုတို့ပါဝင်နေသည်မှာ ထင်ရှားနေပါသည်။
တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဆွ) ခေတ်အချိန်၌ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်ထွန်းကားနေပြီးကျွန်လူတန်းစားတို့ခမျာမှာလည်း အနှိမ်ခံ၊ အနိုင်ကျင့်ခံ ဘ၀မျိုးဖြင့်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျကာ လူဖြစ်ကျိုးမနပ်ဖြစ်နေကြရရှာပေသည်။ သို့ရှိရာအစ္စလာမ်သည် လူလူချင်း တစ်ဘက်သတ်အနိုင်ကျင့်မှုကို လက်မခံ၊ အားမပေးသောသာသနာဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ ကျွန်စနစ်ပပျောက်ရေးကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကာ ရှေ့တန်းက ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့်ပင် အစ္စလာမ့်မဏ္ဍိုင်ကြီး (၅) ရပ်အနက်မှတစ်ရပ်အပါအ၀င်ဖြစ်သော ဇကားသ်(သန့်စင်ဒါန) ငွေကြေးကို ပေးသည့်အခါ၌ "ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်စေရန်" အတွက်ပါပေးကြရန် မိန့်ကြားထားပါသည်။(ကုရ်အာန် ၉း၆၀)။ ထို့ပြင် ဂျန္နသ်သို့ စံမြန်းရမည့်သူတော်ကောင်းတို့၏အရည်အချင်းကိုဖော်ကျူးရာတွင်လည်း - "ကျွန်တစ်ဦးကိုလွတ်မြောက်စေမှု"သည်လည်းတစ်ရပ်အပါအ၀င်ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။}} (ကုရ်အာန် ၉၀း၁၃) အစ္စလာမ်သည် ကျွန်လူတန်းစားကိုသနားကြင်နာခိုင်းပါသည်။ကယ်တင်ခိုင်းပါသည်။ ကောင်းမွန်ရာကိုပြုစေပါသည်။ "ကြင်ဖော်မရှိသော ယောက်ျား-မိန်းမတို့အားလည်းကောင်း၊ ကောင်းသောကျွန်-ကျွန်မများကိုလည်းကောင်း ထိမ်းမြားပေး ကြပါလေ။" (ကုရ်အာန် ၂၄း၃၂)
အစ္စလာမ်သည် ဘာသာခြားအမျိုးသမီးများကိုယူ၍ သာသနာမပြုခိုင်းပါ။"ယုံကြည်သူ မုရ်ှရီက်ထက်စာလျှင် ယုံကြည်သူ ကျွန်မကပို၍ကောင်းမြတ်လှပေသည်။" (ကုရ်အာန် ၂း၂၂၁)
ဟစ်ဂျရီ ၂ ခုနှစ် ၊ ဆွဖရ်လ (၁၂)ရက်နေ့၌ စော်ကားကျူးကျော်သူတို့အားပြန်လည်ခုခံပိုင်ခွင့် ရရှိသွားသဖြင့် အများ ငြိမ်းချမ်းအတွက်မဖြစ်မနေစစ်ပွဲများကို မလွှဲမရှောင်သာဆင်နွှဲခဲ့ကြရလေရာ ခုခံစစ်ပွဲများ၌ကျဆုံးသွားသော ရှဟီဒီ အာဇာနည်များ၏ ဇနီးမယားများမှာ မုဆိုးမဘ၀သို့ဆိုက်ရောက်သွားခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားပြီးတိုင်း မုဆိုးမအရေအတွက်တိုးလာရာ သူမတို့၏ဘ၀ လုံခြုံရေးအတွက်နှင့် အဖမဲ့ကလေးများ၏ရပ်တည်ရှင်သန်ရေးတို့အတွက် အကာအကွယ် ပေးရန်နှင့် နွေးထွေးသောမေတ္တာပေးရန်လိုအပ်လာပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဆွ)က မိမိ၏နောက်လိုက် ဆွဟာဗဟ်တို့ကို မုဆိုးမများကို တရားဝင်ထိမ်းမြားယူကြပါရန်မိန့်ကြားရာတွင် ဆွဟာဗဟ်များကလည်း မန်တော်၏အဆိုအမိန့် ကို နာခံကြပါသည်။ဤနေရာ၌ သိထားအပ်သည်မှာ -
မဒီနာရှိ အန်ဆွာရီ ဆွဟာဗဟ်တို့သည် မိမိတို့၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများအားမရှိရှာသော ဆွဟာဗဟ်များကို မိမိတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအနက်မှ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပင် ပေးဝံ့သူများ၊ ပေးခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြသကဲ့သို့။ မက္ကာမှ မုဟာဂျီရီးန်ဆွဟာဗဟ်တို့သည်လည်း မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများ၊ အိုးအိမ်များအားလုံးကိုပင် စွန့်ဝံ့သူ များဖြစ်ကြရာသူတို့၏ နှလုံးသားစိတ်အစဉ်တွင် စွန့်လွတ်အနစ်နာခံလိုစိတ်များဖြင့်သာထုံမွန်းနေသူများဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရ ပါမည်။ အမျိုးသမီးများကိုတစ်ဦးထက်မက လက်ထက်ခဲ့ကြခြင်းမှာ အကာအကွယ်ပေးလိုမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ကာမဂုဏ် လိုက်စားဖို့အတွက် တဏှာကျူးလွန်ရန် စိတ်ကူးမရှိပါ။ ဤသည်ကိုအလ္လာဟ်ကလည်း ပြင်းထန်စွာ သတိပေးထားပါသည်။
"မိမိတို့၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများဖြင့်ကာမဂုဏ်လိုက်စားသူများအဖြစ်နှင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သူများအဖြစ်နှင့်သာ ထိမ်းမြားကြလေကုန်။" (ကုရ်အာန် ၄း၂၄) အစ္စလာမ်သာသနာ၏ သင်ကြားချက်၌ မိမိမလုပ်သောအလုပ်ကို သူတစ်ပါးအားလုပ်ခိုင်းခြင်းကို အလွန်စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ အဖြစ် မှတ်ယူပါသည်။ "အသင်တို့ မပြုလုပ်သောကိစ္စကို အဘယ်အတွက်ကြောင့် ပြောဆိုနေကြပါသနည်း။အလ္လာဟ့််ထံတွင် အသင်တို့ မပြုလုပ်သော ကိစ္စကို ပြောဆိုခြင်းသည်အလွန်ပင်ရွံ့စရာကောင်းလှ ပေသည်။"(ကုရ်အာန်၆၁း၂-၃) ထို့ကြောင့် တမန်တော်မြတ် (ဆွ)သည် ဆွဟာဗဟ်များကို မုဆိုးမများကိုစောင့်ရှောက်ရန် သင်ကြားရာ၌ မိမိကိုယ်တိုင် လည်းလက်တွေ့စံပြပြုကျင့်ခဲ့ပါသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း တမန်တော်မြတ်၏ဇနီး(၁၁)ပါးတွင် အာအိရှာသခင်မသာလျှင် အပျိုဖြစ်ကာ ကျန် (၁၀)ယောက်မှာမုဆိုးမများသာ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။
အာအိရှာသခင်မနှင့် ပတ်သက်၍ ယိုးစွတ်ချက်တစ်ခုမှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် သခင်မအား အရွယ်မရောက်သေးခင် ထိမ်းမြားခဲ့သည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ယုတ္တိကင်းသော စွပ်စွဲချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ်၏ သင်ကြားချက်၌(က) အရွယ်မရောက်သေးသောသူကို ထိမ်းမြားလက်ထက်ခွင့်မရှိပါ။ (ကုရ်အာန် ၄း၆)(ခ) အမွေတစ်ရပ်အနေဖြင့်လည်း အဓမ္မသိမ်းပိုက်ခွင့်မရှိပါ။ (ကုရ်အာန် ၄း၁၉) အစ္စလာမ်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆန့်ကျင်မှုများရှိစဉ်အခါသမယ၌တမန်တော်ကိုယ်တိုင်က ကုရ်အာန်နှင့် ဆန့်ကျင်သော အမှုများကို ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုပါလျှင် -(၁) အစ္စလာမ်ကို မလိုလားသည့်မက္ကာသား မုရှရီက်တို့၏ တွံတွေးခွက်၌ပက်လက်မျောရမည့်အဖြစ်ပင်။(၂) နောက်လိုက်တို့၏ စိတ်ကူးတွင်လည်း သူကိုယ်၌က မလိုက်နာသောမလုပ်နိုင်သော ကိစ္စအား မိမိတို့ကို ခိုင်းစေသဖြင့် အလ္လာဟ်ရွံသောသူအဖြစ်ရှုမြင်သွားကာ အားလုံးက တမန်တော်အပါးမှ ဆုတ်ခွာသွားကြမည်မှာ ဧကန်ပင်။(၃) တမန်တော်နှင့် ဆွဟာဗဟ်များအကြား၌ အတူရောနှောနေကြသော "မုနာဖိက်"အယောင်ဆောင်မွတ်စလင်မ်များအဖို့မူ တမန်တော်နှင့် ဆွဟာဗဟ်များအကြား၌ဤကိစ္စကိုအကြောင်းပြု၍ သွေးခွဲရန်လည်း မဟာအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပင် မဟုတ်ပါလား။သို့သော် -
(က) မက္ကာသား မုရှရီက်တို့၏ လက်ညှိုးထိုးကဲ့ရဲ့ခြင်းကို တမန်တော်မြတ်မခံခဲ့ရခြင်း(ခ) ဆွဟာဗဟ်တို့၏ အကြည်ညိုပျက်ခြင်းကိုလည်း မခံခဲ့ရခြင်း(အာအိရှာသခင်မ၏ ဖခင်ကြီးအပါအ၀င်)(ဂ) မုနာဖိက်တို့အတွက် သွေးခွဲစရာ၊ ၀ါဒဖြန့်စရာဖြစ်ရအောင် ဟာကွက်၊ပျော့ကွက် မရှိခဲ့ခြင်းမှာ တမန်တော်သည် မိမိပြောသော စကားကိုမိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာခဲ့သောကြောင့်သာဖြစ်ပေသည်။ တမန်တော်မြတ်အား လူပျိုလူလွတ်ဘ၀၌ပင် မက္ကာခေါင်းဆောင်များသည်အစ္စလာမ်ကို ဆက်လက်မဟောကြားက အိုးအိမ်၊ ရတနာပစ္စည်း၊ မက္ကာမြို့ရဲ့အာဏာနှင့်နှစ်သက်ရာအမျိုးသမီးများကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာရာတွင်တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က ခါးခါးသီးသီးငြင်းဆန်ခဲ့ပါသည်။ တမန်တော်သည် အာဏာလည်းမမက်ပါ၊ စည်းစိမ်လည်း မမက်မောပါ။ မိန်းမလည်း မက်မောခြင်းကင်းကြောင်းလက်တွေ့သက်သေထူခဲ့ပြီးပါပြီ။
သက်တော် (၂၅)နှစ်၌ မုဆိုးမတစ်ဦးဖြစ်သူ ခတီဂျာသခင်မနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို တာဝန်သိသိ၊သိက္ခာရှိရှိထူထောင်သွားခဲ့သည်မှာ ခတီဂျာသခင်မ ကွယ်လွန်ချိန် တမန်တော်မြတ်သက်တော် (၄၈)နှစ်အထိပင် ဖြစ်ပါသည်။ ခတီဂျာသခင်မနှင့် (၂၃)နှစ်တာတစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သော တမန်တော်မြတ်အား လူပျိုဘ၀၌ရော၊အိမ်ထောင်သည်ဘ၀၌ပါ မိမိအား စွဲလန်းချစ်ခင်နှစ်သက်သော အမျိုးသမီးများစွာရှိခဲ့ရာ စိတ်ဝင်စားမှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘဲ အားနည်းသူ ကျွန်များ၊အမျိုးသမီးများဘက်မှ လူနည်းစုဘက်မှ ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးရင်း၊ လူမှု့ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အစ္စလာမ့်တရားကို ဖြန့်ချီရင်းဖြင့်သာ မိမိဘ၀ကိုတန်ဘိုးရှိရှိ၊ သိက္ခာသမာဓိအပြည့်ဖြင့် နေထိုင်သွားခဲ့သဖြင့် ဘာသာမတူသူကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင် တို့၏ လေးစားမှုကို အပြည့်အ၀ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤနေရာ၌ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယပြည်၏စံပြခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သော မဟတ္တမဂန္ဓီကြီး၏ စကားကိုကိုးကားဖော်ပြရပါသော်- "ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးစင်းသော ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ရိုးစင်းသောဘ၀ကိုနှစ်သက်ခြင်းတို့မှာ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်ကို အားကျ၍ ဖြစ်ပါသည်။" "အကြင်သူတစ်ဦးသည် အစ္စလာမ်ကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာမည်ဆိုပါကအစ္စလာမ်ဘာသာကို ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင် ချစ်ခင်လေးစားလိုစိတ်များတဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင်။
အစ္စလာမ်သည် အကြမ်းဖက်မှုကို အားမပေး၊ အလ္လာဟ်သည် စစ်ကို မလိုလား "၄င်းတို့သည် စစ်မီးကို မွှေးသော အခါတိုင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ထိုစစ်မီးကို ငြိမ်းစေ တော်မူခဲ့သည်။ ၄င်းပြင် ထိုသူတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ်ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ကြိုးပမ်း အားထုတ်ကြကုန်၏"(ကုရ်အာန် ၅း၆၄) "ထို့ပြင် ၄င်းတို့သည် သင်တို့ထံ စစ်မက်ကျေအေးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပါမူ၊ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား စစ်တိုက်ကြရန်မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမျှ ခွင့်ပြုတော်မူမည် မဟုတ်ပေ။" (ကုရ်အာန် ၄း၉၀)
မျိုးပြုန်းသတ်ရန်ဝေးစွ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုပင် မတရားသတ်ဖြတ်ခွင့် မရှိ "မည်သူမဆို တစ်ဦးတစ်ယောက်အား အသက်တစ်ချောင်း၏အစားလည်းမဟုတ်၊တိုင်းပြည်၌ သောင်းကျန်းဖျက်စီးမှု ကြောင့်လည်းမဟုတ်၊သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါမူထိုသူသည် လူသားအားလုံးကို သတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ပင်။"(ကုရ်အာန်၅း၃) တမန်တော်မြတ်သည် မက္ကာကို ပြန်လည်အောင်နိုင်သောအချိန်၌ ဖျက်စီးခဲ့သောနတ်ရုပ်ထုများမှာ တမန်တော် အာဒမ်(အ-စ) အုတ်မြတ်ချ၍ တမန်တော် အိဗ်ရာဟီမ်(အ-စ)မြှင့်တင်ခဲ့သော အလ္လာဟ့််အိမ်တော်မှ နတ်ရုပ်များသာဖြစ်ပြီး၊မက္ကာခေါင်းဆောင် အဗူစူဖီယာန်အိမ်မှ ရုပ်ထုများကို မဖျက်စီးခဲ့သလို၊အခြားမည်သည့်အိမ်၊ မည်သည့်ဆိုင်၊ မည်သည့်နေရာမှ မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက်ပြုလုပ်ထားရှိသော ကိုးကွယ်ရာ ရုပ်ထုတစ်ခုတစ်လေကိုမျှပင်ဖျက်စီးတော်မမူခဲ့ပါ။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုထားခဲ့ပါသည်။ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်သည် တစ်ပါးတည်းသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အိမ်တော်ဖြစ်သည့်အတွက် ရုပ်ထုထားရှိခွင့်မပြုသဖြင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အစ္စလာမ်သည် အခြားဘာသာတရားကို ဖျက်စီးရန်ဝေးစွ၊ မကောင်းပြောခြင်းကိုပင် တားမြစ်၏ "အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပြင် ယင်းသူတို့တသကိုးကွယ်နေကြသောကိုးကွယ်ရာများကို မကောင်းပြောဆို ကဲ့ရဲ့ခြင်းမပြုကြနှင့်။" (ကုရ်အာန်၆း၁၀၈)
အခြားဘာသာဝင်တို့၏ အဆောက်အဦးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခိုင်းထားသည် "အကယ်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူသားတို့၌ တစ်ချို့ကိုတစ်ချို့ဖြင့်ကာကွယ် တော်မူခြင်းမရှိပါက ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊၀တ်ကျောင်းတော်များ၊ မေတ္တာပွားများရာ တရား စခန်းရိပ်သာများ၊အလ္လာဟ်နာမတော်ကို တသပွားများရာ မတ်စ် ဂျီဒ် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် များသည်ဧကန်အမှန် ဖြိုဖျက်ခြင်းခံကြရပေမည်။" (ကုရ်အာန် ၂၂း၄၀) ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သော၊ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအမွေအနှစ်များအား ယနေ့ထက်တိုင် ပါကစ္စတန် အစိုးရနှင့် ပြည်သူများကအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွေအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာ စောင့်ရှောက်ထားကြပါသည်။
မွတ်စလင်မ်အများဆုံးနေရာ အင်ဒိုနီးရှား၌လည်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးကြီးဖြစ်သော "ဗောရော- ဗုဒ္ဓေါ" စေတီတော်ကြီးကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွေတစ်ရပ်အဖြစ် အားလုံးကပင်ဂုဏ်ယူထိန်းသိမ်းနေကြပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအစ္စလာမ်နိုင်ငံများတွင် လူများစုမွတ်စလင်မ်များနှင့်လူနည်းစုဘာသာခြားတို့သည် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ကြကာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများကိုအပြန်အလှန်အကာအကွယ်ပေးကြပေသည်။
မွတ်စလင်တို့ ဓါးမိုး၍ သာသနာမပြုခဲ့ပါ မွတ်စလင်တို့သည် စပိန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း ၈၀၀ တိုင်အုပ်စိုးသွားခဲ့ကြပါသည်။ စပိန်က မွတ်စလင်တို့သည် တိုင်းသူပြည်သား များအစ္စလာမ်ကို ကူးပြောင်းလက်ခံရေးအတွက် ဘယ်တုံးကမှဓါးမိုးပြီးအတင်းအဓမ္မမပြုခဲ့ကြပါ။ မွတ်စလင်မ်တို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကို နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့သာဆန္ဒရှိခဲ့ပါလျင် အိန္ဒိယမှာရှိသောမွတ်စလင်မ်မဟုတ်သောသူများကို တစ်ဦးမကျန်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကူးပြောင်းလက်ခံကြရမယ်ဆိုပြီး အင်အားသုံးကာ ဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။အိန္ဒိယတွင် လူပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာသည် မွတ်စလင်မဟုတ်သောသူတွေပင်၊မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သောသူများသည်အစ္စလာမ်ဟာဓါးမိုးသာသနာပြုခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်းကို သက်သေခံနေကြပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာမှာ မွတ်စလင်မ်လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ။
မလေးရှားနိုင်ငံသည်လည်းလူများစုကြီးက မွတ်စလင်မ်များဖြစ်ကြပါသည်။မည်သည့်မွတ်စလင်မ်စစ်တပ်ကြီးကများ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံတို့သို့မရောက်ခဲ့ပါ။ အလားတူ အစ္စလာမ်သည် အာဖရိက အရှေ့ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများတွင် အလျင်အမြန်ပြန့်ပွားသွားခဲ့ရပါသည်။ အာဖရိက အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသကိုမည်သည့်မွတ်စလင်မ် စစ်တပ်ကြီးကမျှမသွားရောက်ခဲ့ပါ။ အမှန်စင်စစ်သော်ကား ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှုတို့မှာ တူကြသည်မဟုတ်ပေ။(သို့ဖြစ်ပေရာ) အသင်သည် (မကောင်း မှုကို)ကောင်းမှုဖြင့် ခုခံတွန်းလှန်ပါလေ။သို့ဖြစ်လျှင် အကြင်နှင့်ရန်ငြိုး ရှိသူသည် မိတ်ဆွေအရင်းကဲ့သို့ဖြစ်လာပေမည်။ (၄၁း၃၄)
Special thanks to Brother Minthu
Posted by Ordinary person at 6:49 PM No comments:
''နှလုံးသားရဲ့သခင် Allah (SWT)''
သခင့်အပေါ်ဖူးမော်ပျော်ပါး
သခင့်အပေါ်သစ္စာခိုင်မြဲ
Posted by Ordinary person at 8:57 PM No comments:
The word Dhul-Hijjah means the month of pilgrimage and this is the last of the sacred months in which fighting was forbidden.
The first ten days of Dhul-Hijjah are the most virtuous days in this month, with Hajj, the fifth pillar of Islam being performed in this sacred month. Abu Haraira (RA) reported from the Holy Prophet (SAW)
“Amongst all days there are none better to engage in sole worship of Allah than in the ten days of Zul-Hijjah, To observeafast on any of these days is equivalent to fasting throughout the year, to actively engage in prayer and worship throughout any of these nights holds such rewarding values leveling with the "night of power (Laylatul-Qadr).” [Tirmidh]
It has been stated in the Holy Qur'an,
“By the dawn; By the ten nights (ie. the first ten days of the month of dhul-Hijjah), and by the even and the odd (of all the creations of Allah) and by night when it departs. There is indeed in them (the above oaths) sufficient proofs for men of understanding (and that they should avoid all kinds of sins and disbelief).” (Al-Fajr 89:1-5)
The 9th of Dhul-Hijjah is the day of Arafat, when pilgrims stand on the mountain asking for sincere forgiveness for their sins, as an indication of how man will be gathered on the day of reckoning. Fasting on this day, by Muslims who are not performing the pilgrimage, brings with it great virtues, Muslim narrated that Fasting on the day of Arafat expiates the [minor] sins of two years:apast one andacoming one. And fasting on the day of Aashura expiates the sins of the past year.
Abu Qataadah (RA) reported inapart narration from the Holy Prophet (SAW) concerning the fast observed on this day,
“I have full confidence in Allah for the one who observesafast on the day of Arafat that his previous year's sins and the proceeding year's sins are forgiven.” [Muslim]
Abu Dawud narrated that one of the wives of the Prophet (SAW) said Allah’s Messenger (SAW) used to fast the (first) nine days of Dhul-Hijjah, the day of Aashura, and three days of each month.
Eid-ul-Adha is celebrated on the 10th of the month of Dhu-Hijjah and continues till the 13th day. This celebration is observed to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim (AS) when he was asked to sacrifice his own son Prophet Ishma’iI (AS). Ibrahim showed his readiness and Allah (SWT) was very pleased with him, andalamb was sacrificed in place of his son on Allah’s (SWT) command. The Holy Qur’an gives the following account of Prophet Ibrahim’s (AS) act of sacrifice,
“(Ibrahim prayed:) My Lord, grant meadoer of good deeds. So We gave him the good news ofaforbearing son. But when he became of age to work with him, he said: O my son, I have seen inadream that I should sacrifice you; so consider what is your view. He said: O my father, do as you are commanded; if Allah pleases you will find me patient. So when they had both submitted and he had thrown him down upon his forehead, and We called out to him saying, O Abraham, you have indeed fulfilled the vision. Thus do We reward the doers of good. Surely this isamanifest trial. And We ransomed him withagreat sacrifice.” (As-Saffat 37:100–107)
Muslims offer Eid salat (2 rakats) in congregation, this is obligatory on every male Muslim and can be preformed any time between ishraq and zawal. Animals are then sacrificed to seek the pleasure of Allah and demonstrate complete submission and proof of complete obedience to Allah. The meat is shared amongst poor, relatives, neighbors and friends.
The Prophet (SAW) performed the farewell Hajj and gave the historic sermon known as the "Farewell Sermon"
Egypt was conquered by the army sent by Umar (RA)
Uthmaan (RA) was appointed the third Caliph
Fatimah (RA) married the fourth Caliph Ali (RA)
Umar (RA) met martyrdom on the 27th of Dhul-Hijjah in the year 26 AH
Uthmaan (RA) was martyred on the 18th of Dhul-Hijjah in the year 35 AH
yaum al-ahad يوم الأحد (first day)
yaum al-ithnayna يوم الإثنين (second day)
yaum ath-thalatha' يوم الثُّلَاثاء (third day)
yaum al-arba`a' يوم الأَرْبعاء (fourth day)
yaum al-khamis يوم خَمِيس (fifth day)
yaum al-jum`a يوم الجُمْعَة (gathering day)
yaum as-sabt يوم السَّبْت (sabbath day)
Ref : http://www.ciibroadcasting.com/index.php/islam/months-in-islam
Posted by Ordinary person at 12:25 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 9:00 PM No comments:
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပညာသင်ယူနေ၍သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ် လုပ်နေ၍သော်လည်းကောင်း၊ နေ့စဉ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် အလုပ်များနေလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းများကြောင့် အောက်ပါပုံမှ လူများကိုမေ့လျော့သွားတဲ့အခါလည်းရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲမှ ငွေ၊ အဝတ်အထည်၊ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးမှုတို့သည် ထိုသူများအတွက်များစွာအကျိုးရှိလှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်များ၌ ၎င်းချို့တဲ့သောသူများကိုလည်း သတိရစေချင်ပါသည်။
ထိုသူများသည်တစ်ခြားသူများမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မွတ်စလင်မ် ညီအကို မောင်နှမများသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သာ ၎င်းတို့၏နေရာတွင်ရှိနေခဲ့လျှင် .......... ဒါကိုစဉ်းစားရင်း ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ တစ်စိမ့်စိမ့် ခံစားမိပါသည်။
ကိုယ့်မွေးရပ်မြေမှ ချို့တဲ့သူများမှအစ ကမ္ဘာအနှံ့မှချို့တဲ့သူများအား တတ်နိုင်သလောက်ကူညီလိုလျှင် ကူညီလို့ရပါသည်။ ကိုယ်လုပ်သမျှကောင်းမှုအလုံးစုံကို နှစ်ဘဝ၏အရှင်သခင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အလုံးစုံသိမြင်တော်မူသည်။ထိုဖြူစင်မှုသဒ္ဓါတရားအပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ချီးမြင့်မှုသည်လည်း ကိုယ့်အပေါ်ကျရောက်မှာဧကန်မလွဲပေ။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင်လည်း ချို့တဲ့သူများအား စာနာထောက်ထား ကူညီကြရန် ပါရှိသည်။
တစ်နေ့ကျွန်ုပ်တို့ သည်အောက်ပါနေရာသို့ သွားလျှင် ကိုယ်နှင့်အဘယ်အရာမှပါမည်မဟုတ်ပါ။
Posted by Ordinary person at 2:05 AM No comments:
အကွဲအပြဲနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း - ဘာကိုရွေးမလဲ
Myanmar Muslim Association of Malaysia
သောကြာနေ့ ခွသ်ဘာ ၃၃/၂၀၀၉
Shawwal 12 1430
ချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းတို့သည် ချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းတို့သည် စကြာဝဠာလောကခပ်သိမ်းအား
ပြုစုပျိုးထောင်တော်မူသော အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာမြတ်အလ္လာဟ်အတွက်သာ ဖြစ်တော်မူပါ၏။ ထိုအရှင်မြတ်စေလွှတ်တော်မူသော လူသားအလင်းပြ နဗီတမန်တော်အပေါင်းနှင့် နောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ် မုဟမ္မဒ်သခင် (ဆွ) အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု အဖြာဖြာ သက်ရောက်ပါစေ။
ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ခင်ဗျားအတ်စ္စလာမု အလိုင်းကွန်းမ် ၀ရဟ်မသုလ်လာဟိ ၀ဗရကါးသုဟ်
ကွန်မြူနစ်ဝါဒကျဆုံးခြင်းနှင့် အော်တိုမန်အင်ပါယာပြိုကွဲခြင်းကိုလေ့လာခြင်းကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေနဲ့ သွေးချောင်းစီးကာလ လွန်မြောက်တော့ အရင်းရှင်စနစ်နဲ့ ကွန်မြနစ်စနစ်ကြားမှာစစ်အေးခေတ် (Cold War) ကာလကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်အေးခေတ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ယုံကြည် တဲ့ဝါဒအပေါ် မြဲမြဲမြံမြံရပ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်တဲ့နည်းပေါ့။ စနစ်တစ်ခုထဲမှာ တောင်အယူအဆကွဲလွဲချက်ပေါ်လာရင် ဖြုတ်၊ ထုတ်၊ သတ် ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန် ဦး ဆောင်တဲ့အနောက်ဥရောပက ဒီမိုကရေစီဝါဒနဲ့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ဥးဆောင်တဲ့ အရှေ့ဥရောပက
ဒီစစ်အေးခေတ်မှာ ဂျာမဏီကိုကြည့်ရင် (၉၆)မိုင်ရှည်လျားတဲ့ ဘာလင်တံတိုင်းကြီးက အရှေ့ဂျာမဏီ
(ဆိုဗီယက်အုပ်စ၀ုင)် နဲ့အနောက်ဂျာမဏ(ီ ဒီမိုကရေစီအုပ်စ၀ုင)်အဖြစ်ခြွဲခားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘာလင် တံတိုင်းကြီးဟာ(၂၈)နှစ်တာကြာပြီးတဲ့နောက် ၁၉၈၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့ညမှာ ဖြိုဖျက်ခြင်းခံလိုက် ရပြီး အရှေ့ဂျာမဏီနိုင်ငံနဲ့အနောက်ဂျာမဏီနိုင်ငံတို့ ပေါင်းစည်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအုပ်စုရဲ့အောင်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုစစ်အေးကာလမှာလက်နက်နဲ့မတိုက်ဘဲ ဘာလင်တံတိုင်းကြီးဘာလို့ပြိုသွားရတာလ။ဲ
ဂျာမဏီမှာ ကန်ွမြူနစ်ဝါဒ ဘာဖြစ်လို့ကျဆုံးသွားသလဲ။ အဓိကအဖြေတစ်ရပ်ကတော့ ပြည်သူလူထုတွေဆီကို ကွန်ပျူတာတွေရောက်လာပြီး ပြူတင်းပေါက်(Window)တွေကတဆင့် ကမ္ဘာကြီးကို မျှော်ကြည့်လို့ရလာခဲ့ခြင်းပါပဲ။ နံရံတံတိုင်းနဲ့ ဘောင်ခတ်ထားခြင်းခံရတဲ့ လူတွေရဲ့အသိအမြင်တွေကို မီဒီယာစွမ်းအားက ဖွင့်ပေးလိုက် တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုက ပြောင်းလဲသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘယ်ပြည်ပစစ်တပ်ကမှ မကျူးကျော်ဘဲ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုလဲပြီး အရှေ့ဥရောပမှာလည်း ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်က ဆိုဗီယက်ယူနီယံထဲကိုအဓမ္မသွတ်သွင်းခြင်း ခံထားရတဲ့ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံ (၆)နိုင်ငံလည်း လွတ်လပ်ရေး ရသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် နံရံတံတိုင်း (Wall) ကို စစ်အေးခေတ်ရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ဖေါ်ညွှန်းခဲ့ကြပြီး မိမိကိုယ်မိမိတို့ တံတိုင်း ခတ်ပြီးအကွဲအပြဲကို ပြဆိုနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အေးအလွန်ခေတ်ရဲ့သင်္ကေတကတော့ အင်တာနက်ဝက်ဘ် ဆိုက် (Web)ဖြစ်လာပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဖေါ်ညွှန်းတဲ့ ကမ္ဘာ့ပင်ကူအိမ်ကြီးပြဲဖစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကမ္ဘာ့လူသားတွေဟာတံတိုင်း(Wall) ကနေ ကမ္ဘာ့ပင့်ကူအိမ်ကြီး (Web) ဆီကို ရွေးချယ်သွားနေကြပြီဖြစ် ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရင်အကွဲအပြဲကနေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆီကို သွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်စလင်မ်တို့ရဲ့အော်တိုမန်အင်ပါယာပြိုကွဲခြင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သင်ခန်းစာယူစရာတွေ အများကြီးတွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်ထုဟာ တူရကီကိုဗဟိုပြုပြီး အော်တိုမင်အင်ပါယာအဖြစ် တစ်စုတစ်စည်းတည်း တည်ရှိနေတာကိုကိုလိုနီစနစ်ကျင့်သုံးချင်တဲ့ ဗြိတိသျှအစိုးရအနေန့ဲ အရဗ်တွေကို တူရကီနဲ့သေွး ခွဲပြီးအော်ိုမင်အင်ပါယာအောက်ကခွဲထွက်ဖို့ မြှောက်ပင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အရဗ်တွေကို လွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ပေးမယ် ဆိုပြီး မြူဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။
အရဗ်တွေကတကယ်ယုံပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ကြတော့ နောက်ဆုံး အော်တိုမန်အင် ပါယာကြီး ပြိုကွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အရဗ်တွေမျှော်လင့်ထားခဲ့သလို လွတ်လပ်ရေးမရခဲ့ကြဘဲ ဥရောပရဲ့ ကျွန်သ ဘောက်ဘ၀ကိုသာ
သက်ဆင်းခဲ့ကြရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရဗ်တွေအနေနဲ့ အသက်သွေးချွေးပေးပြီး လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါကျတော့ ညီညွတ်တဲ့အရဗ်နိုင်ငံအဖြစ် မ ပေါ်ပေါက်တော့ဘဲအရဗ်နိုင်ငံများစွာ ပြိုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ ရအဗ်တွေ တစ်နိုင်ငံတည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ အရဗ်အဖွဲ့ချုပ် (Arab League)ဖွဲ့ပြီးသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတော့တယ်။
အလားတူပဲ မွတ်စလင်မ်ကမ္ဘာဟာလည်း တစ်ခုတည်း သောအင်ပါယာမတည်ဆောက်နိုင်ကြတော့ဘဲ (၅၇)နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ အစ္စလာမစ်ညီလာခဲ့အဖွဲ့) Organization Of Islamic Conference) (OIC)အနေနဲ့သာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ အစ္စလာမ်ဆိုတာ ဆုံးမစာ သာသနာအဆင့်မဟုတ်ဘဲ ဒီန်လို့ခေါ်တဲ့ ဘ၀တည်ဆောက်မှု
လမ်းစU်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲ၊ ကျောင်းတော်ဝါဒစွဲတွေကို လွန်မြောက်ပြီး “အလ်-အာ လမီယဟ်” လို့ခေါ်တဲ့ စကြ၀ဠာလောကခပ်သိမ်းနဲ့ယှU်တဲ့လမ်းစU် (Universalization) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွတ်စလင်မ်တွေဟာလူမျိုး၊ ဘာသာစကား၊ အ၀တ်အစား၊ ဒေသ၊ ယU်ကျေးမှု ဘယ်လိုပဲကွဲကွဲ တစ်စုတည်း သော အွမ္မသ်သားချင်း (အွမ်မသွန်း-၀ါဟိဒဟ်)အဖြစ် အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်က သတ်မှတ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ် (ကုရ်အာန် ၂း၂၁၃)။
မနာလိုမှုတွေကြောင့် ကွဲပြဲသွားကြတယ်လို့လည်း သတိပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းတမန်တော်မြတ်က
ကမ္ဘာ့တစ်နေရာက မွတ်စလင်မ်တစ်ဦး ဝေဒနာဖြစ်ရင် ကျန်ကမ္ဘာတစ်နေရာ က မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးလည်း ခံစားရမယ်လို့ ဖေါ်ညွှန်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစ္စလာမ့်ဘ၀တည်ဆောက်မှုလမ်းစဉ်မှာ--·
လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲတွေနေရာမှာ သတ်က၀ါလို့ခေါ်တဲ့ “အလ္လာဟ်သိစိတ်နဲ့ တာဝန်ကျေခြင်း”
(၀ါ)မှန်သော အယူ၊ မှန်သော အကျင့်နဲ့သာ မြင့်မြတ်မှုကို တိုင်းတာနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ (ကုရ်အာန် ၄၉း၁၃)·
ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကိုရှေ့တန်းမတင်ဘဲ “အလ္လာဟ် တမန်တော်မြတ်နဲ့ ဂျီဟာဒ်ခေါ် အမှန်တရားအတွက် သက်စွန့်
ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း” ကိုသာ အချစ်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ (ကုရ်အာန် ၉း၂၄)·
ဂိုဏ်းဂဏ၀ါဒစွဲနေရာမှာ အလ္လာဟ်ရဲ့လမ်းညွှန်ကုရ်အာန်ဟာ မှတ်ကျောက(် ဖုရ်ကာန)် န့ဲ တမန်တော်မြတ်ဟာစံနှုန်း(အုစ်ဝသွန်-ဟစနဟ်)နဲ့ အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ (ကုရ်အန် ၂း၁၈၅၊ ၃၃း၂၁)
ဒါကြောင့် မွတ်စလင်မ်များအနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်စ၊ွဲ လူမျိုးစ၊ွဲ ဒေသစ၊ွဲ ကျောင်းတောဝ်ါဒစွဲစတ့ဲ နံရံတံတိုင်းများကို ဖြိုဖျက်ပြီးတစ်စုတည်းသော အွမ္မသ်ဆိုတဲ့ စကြ၀ဠာလောကခပ်သိမ်းနဲ့ယှဉ်တဲ့ လွင်ပြင်ဆီကိုလျှောက် လှမ်းကြပါစို့။
အလ်ဟာဂ်ျ ဖုဖ်သီ ဦးမြင့်သိန်း (ငြိမ်းချမ်းလုလင်)
Special thanks to Aunty Daw La' La' Myint
Posted by Ordinary person at 3:40 PM No comments:
The Well of Zamzam(or the Zamzam Well, or just Zamzam; Arabic: �) isawell located within the Masjid al Haram in Mecca, 20 meters east of the Kaaba, the holiest place in Islam. According to Islamic tradition it wasamiraculously- generated source of water from angel Jibrail (Gabriel), which began thousands of years ago when Ibrahim's infant son was thirsty. Millions of pilgrims visit the well each year while performing the Hajj or Umrah pilgrimages, in order to drink its water. By Saudi law, the water cannot be sold outside of the kingdom, but because of strong demand there isathriving market in fake Zamzam water in other countries.
Zam Zam is 18X14 ft & 18 meter deep water well.
It started 4000 yrs ago.
Never dried since then.
Never changed the taste, no Algea or plant growth in the pond, thus no disease caused.
It was tested by European Laboratories & declared fit for drinking.
This small pond provides water to millions of people through heavy motors pulling 8000 lit: per second and after 24 hours in only 11 mins completes its level. Thus its water level never decreases
Special thanks to aunty Daw Le' Le' Myint.
Posted by Ordinary person at 9:17 PM No comments:
Dhul-Qi’dah is taken from the word "qa'ada" which means to sit. During its time, people used to stop their business activities and sit and prepare for the Pilgrimage.
As well as being the first of the four sanctified months, Dhul-Qa’dah is also one of the months of Hajj (see Shawwal). Despite the significance of this month, no specific acts of worship are prescribed for it.
The Battle of 'Khandaq (trench) or Ahzab' took place in the year5AH
The Truce of Hudaubiyah in the year6AH
'Bay'at-e-Rizwaan' (The oath of allegiance named Rizwaan) in the year6AH
The Holy Prophet (SAW) and his Companions returned to Makkah for Umrah in the year7AH
Posted by Ordinary person at 3:26 PM No comments:
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတော်မူသော မဟာဂရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ မွတ်စလင်မ်မောင်နှမများသည် မိမိတို့၏ဘဝဖြတ်သန်းရာလမ်းကြောင်းတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား တသ သတိရကြသည်။ မိမိ၏ဆန္ဒများအောင်မြင်စေရန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ (သာဝါကာလ်) အရင်အပ်နှံပြီးလုပ်ကြသည်။ ဤသည်ပညာရေး အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ရဗ်ဗေ့၊ ဇစ်ဒ်နီ၊ အင်လ်မန်။
အဓိပ္ပါယ် : အို ကျွန်တော်မျိုး/မ ကိုမွေးမြူတော်မူသောအရှင်၊ ကျွန်တော်မျိုး/မ ၌ ပညာကို တိုးပွါးများပြားစေတော်မူပါ။
ပညာသင်ယူနေသူများအတွက် ထိရောက်သော ဒိုအာ
အောင်မြင်မှုနှင့် ပီတိများအတွက် အလ်ဟမ်းဒုလိလာဟ်
ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်နေသလို ဧည့်သည်များလည်းအမြဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ အာမီးန်။
Posted by Ordinary person at 8:10 PM No comments:
အိုလမာ-အစ္စလာမ် သာသနာ့ ပညာရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် စားသောက်ကုန်များ “ဟလာလ်” ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေး
အိုလမာ-အစ္စလာမ် သာသနာ့ ပညာရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် စားသောက်ကုန်များ “ဟလာလ်” ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စသက်ဆိုင်သူများ သိသာရန် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
အောက်ပါစက်ရုံ/ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်သောစားသောက်ကုန်များကို အိုလမာ-အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်များအဖွဲ့ချုပ်“ဟလာလ်”ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကော်မတီမှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်များအရစိစစ်၍ “ဟလာလ်” ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (CERTIFICATE OF HALAL)များကိုသက်တမ်းအလိုက် သတ်မှတ်ထုတ်ပေးပါသည်။
(SEAL OF THE HALAL CERTIFICATION COMMITTEE) LOGO ပါစားသောက်ကုန်များသည် ဤကော်မတီမှ စိစစ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် စားသောက်ကုန်များဖြစ်ကြောင်းအများသိစေရန် အသိပေးကြေညာလိုက်ပါသည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွက် ကော်မတီမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစိစစ် ထောက်ခံစာထုတ်ပေးပြီးဖြစ်သော စားသောက်ကုန်များမှာ-
(1) Super Five Manufacturing Co.,Ltd(ဘီစကွတ်မျိုးစုံ)၊
(2) Happy+Happy Star(ဖျော်ရည်လုပ်ငန်း)၊
(4) M.G.S food Co.Ltd Star Milk(နို့မှုန့်)၊
(5) Pacific Food Industries Co.,Ltd (Happy Cow နို့ဆီ)၊
(6) G.D.M Co., Ltd (Feel သကြားလုံး)၊
(7) Mitzu Tun Myint Co.,Ltd (ဘုတ်ဆုံမ မဆလာ)၊
(8) Green Circle Co., Ltd (Ve Veဖျော်ရည်)၊
(9) Myanmar Bisco Food Industries .,Ltd (မုန့်မျိုးစုံ)၊
(11) Myanmar May Son Ind. Co., Ltd.(Good Morning မုန့်မျိုးစုံ)၊
(12) Fisheries And Marine Products 2000 Ltd. (ငါးသေတ္တာ)၊
(13) Shwe Ayer Nadi Co., Ltd (လေဆာသွားတိုက်ဆေး)၊
(14) Tinye Win Co., Ltd (Yess သကြားလုံး)၊
(15) Tin Zar Kyaw Production Co., Ltd. Spoonsor-c (ဖျော်ရည်အမှုန့်)၊
(17) Quality Food Production Co., Ltd(ဖျော်ရည်မျိုးစုံ)၊
(18) လပ်ကီးမုန့်တိုက်၊ မြစ်ကြီးနား(ကိတ်မုန့်မျိုးစုံ)၊
(19) ရင်ရင်မုန့်တိုက်၊ မြစ်ကြီးနား(ကိတ်မုန့်မျိုးစုံ)၊
(21) United Product Co., Ltd (Gold သကြားလုံး)၊ Gold, My Love Unitedသကြားလုံးများ၊
(23) ဂျိုကာနှင့် ရီရှင်းမုန့်တိုက်(ကိတ်မုန့်မျိုးစုံ)၊
(24) Daw Yone Co., Ltd. (Mr.Candy)(သကြားလုံး)၊
(25) Gold Power Co., Ltd. ကလေးအဟာရမှုန့်၊
(26) A & S International Co., Ltd. (3 in 1 Super One Instant Coffee mix)၊
(27) Delicious Food Co., Ltd. (One Tea နို့ဆီ)၊
(28) Myanmar Mamee Double Decker., Ltd. အသင့်စား ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ ကြာဇံချက်၊ စနက်၊
(29) Myanmar Lion Co., Ltd (Gold Roast Coffee mix)၊
(30) သီရိအဏ္ဍဝါကုမ္ပဏီလီမိတက်(Sun go goဖျော်ရည်မျိုးစုံ)၊
(31) မြန်မာလီဝေဝေစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း (Oishi)၊
(32) Pae Link Trading Ltd& Diamond Star Flavour Milling (ဂျုံမှုန့်)၊
(34) Ever Sunny Industrial Co., Ltd. (Coffee mix)၊
(35) A&T Bakery and Confectionery (ပေါင်မုန့်နှင့် ကိတ်မုန့်မျိုးစုံ)၊
(36) Sawa သဘာဝဖျော်ရည်မျိုးစုံ၊
(37) Golden Lion လက်ဖက်ခြောက်၊
(38) Sein Yaing Trading Co., Ltd. (ဂျင်ဆင်းသစ်ခွလက်ဖက်ခြောက်) တို့ဖြစ်ပါသည်။
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်း/ စက်ရုံများအတွက် လိုအပ်သောထောက်ခံစာများကို အမှတ်(၇၆)၊ ပထမထပ်၊ ၂၈လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ “ဟလာလ်” ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု ကော်မတီရုံးခန်းသို့ ဆက်သွယ်ကာနည်းလမ်းတကျ လျှောက်ထားစိစစ်မှု ခံယူရရှိနိုင်ပါကြောင်း၂၀၀၉ခုနှစ်ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ်ရန်ကုန်တိုင်း(မ်)ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by Ordinary person at 4:46 AM No comments:
Month of Shawwal and Significant events
The word “Shawwal” means uplift or breakage possible due to the fact that in pre-Islamic times the Arabs believed any marriage taking place in Shawwal would always turn out to be unsuccessful.
Shawwaal is the first of the three months of Hajj, and is also known as Ashhur al-Hajj (month of Hajj). Although the major acts of Hajj are performed in the first ten days of Zul-Hijjah, the period from the 1st of Shawwaal up to the 10th of Zul-Hijjah is held to be the time of the Hajj since it is permissible to perform some of the acts of the pilgrimage during it including tawaaf-ul-qudum followed by Sa’i, and Umrah, which if performed, can be affiliated to Hajj making it Hajj of Tamattu.
The first day of Shawwaal is marked by the festival of Eid-Ul-Fitr,aday when all sins are forgiven asareward for fasting and prayers in the month of Ramadan. It is mandatory for the all Muslims, if they are able, to pay sadaaqa-ul-fitr to the poor so they too may enjoy the day with others and it is sunaah to pay this prior to offering the2rakets of Eid prayers. The salat is obligatory on every male Muslim and can be preformed any time between ishraq and zawal.
Nafi` reported on the authority of Ibn `Umar that the Prophet (SAW) would order that zakat al-fitr be distributed among the poor and would say,
“Spare them (i.e., the poor) begging on this day (the day of Eid).” [Ahmad]
Al-Bukhari reported that Ibn ‘Umar said,
"The Prophet (SAW) made zakat al-fitr obligatory" and Ibn `Umar said in the end of this hadith, "People used to give zakat al-fitr (even)aday or two before the `Eid.”
This indicates that there was unanimity on the permissibility of paying zakat al-fitr one or two days before the day of Eid. Besides, paying it one or two days earlier than its due time does not contradict its aim, i.e., satisfying the need of the poor on the day of Eid, since this zakah or part thereof remains with the poor until the day of Eid.
THE SIX FASTS OF SHAWWAAL
It is sunnah to fast for six days in Shawwaal, as narrated in the following hadith by Abu Ayyub Ansaru (RA) that the Holy Prophet (SAW) has said,
“If one throughout his life keeps the fasts of Ramadan and keeps six consecutive fasts in Shawwaal it will be as though he has keptawhole life time of fasts, and if one fast for six consecutive days in Shawwaal it will be as though he has fasted all year round.” [Muslim]
This can be explained in the following manner, the one who bringsasingle pious deed will be rewarded for ten, the fasts of Ramadan are, therefore, equal to fasting for ten months while the six fasts of Shawwaal are equal to fastingafurther two months, givingatotal of twelve months or one year.
The practice of offeringasacrifice on the 15th day of this month is an innovation which has no religious significance associated with it.
Aa'ishah (RA) was born in Shawwaal, 4. years after Prophethood and9years before Hijri
Aa'ishah (RA) married the Holy Prophet (SAW) in Shawwaal, 10. years after Prophethood and3years before Hijri
The fight between Banu Qaynaqaa took place between the battle of Badr and Uhud, in Shawwaal,2AH
The battle of Uhud also took place in Shawwaal,3AH
Hussain (RA), the Holy Prophet's (SAW) grandson (son of Fatima (RA)) was born in the month of Shawwaal,4AH
The Holy Prophet (SAW) married Umme Salamah (RA) in Shawwaal, 4AH
Aa'ishah (RA) mother passed away in year5AH
The Holy Prophet's (SAW) uncle Abu Talib, departed from this world in the middle of Shawwaal in the year5AH
Imam Bukhari (RA) was born onaFriday of Shawwaal in the year 194 AH
Posted by Ordinary person at 2:26 AM No comments:
မွတ်စ်လင်မ်မောင်နှမများအတွက် အကျိုးရှိသော စာသားများ
Zakil (Tasbeeh) Allahu ...Allahu.....togheter with your heartbeat.
Please click the pictures to read clearly.
Posted by Ordinary person at 10:45 PM No comments:
ဟေး .... ငါ၏စိတ်ဝိညာဉ် မင်းကိုတီးတိုးပြောမယ်
မိစ္ဆာ (evil) တို့၏အကျဉ်းထောင်မှ အဝေးဆုံးမှာရှိနေပါစေ
ကမ္ဘာကြီးကို အချစ်မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့ ကြည့်လျှက်ပါ
နာကျင်မှု၊ ပူဆွေးမှု ၊ ဒုက္ခများ ပပြောက်သွားမယ်
Posted by Ordinary person at 12:46 AM No comments:
သောကြာနေ့ ခုသုသ်ွဗ်ွဗဟ် ၃၁/၂၀၀၉
Ramadan 28 1430 September 18 2009
ချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းတို့သည် စကြာဝဠာ လောကခပ်သိမ်းအား ပြုစုပျိုးထောင်တော်မူသော အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာမြတ်အလ္လာဟ်အတွက်သာ ဖြစ်တော်မူပါ၏။ ထိုအရှင်မြတ် စေလွှတ်တော်မူသော လူသားအလင်းပြနဗီတမန်တော်အပေါင်းနှင့် နောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ် မုဟမ္မဒ်သခင်(صلى اله عليه وسلم) အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု အဖြာဖြာသက်ရောက်ပါစေ။
ညီနောင်ညီအစ်မအပေါင်းတို့ခင်ဗျားအတ်စ္စလာမုအလိုင်းကွန်းမ် ၀ရဟ်မသုလ်လါးဟိ ၀ဗရကါးသုဟ်လမြတ်ရမဒွါန်ရဲ့ (၂၇)နေ့ညကို ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် စတင်ကျရောက်တဲ့ညဉ့်မြတ် (လိုင်လသုလ်-ကဒရ်) အဖြစ်ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပကြပါတယ်။ နှစ်စဉ် ရမဒွန်လရဲ့ ညဉ့်ဦးယံအေရှာ ဆွလားသ်အပြီးသရာဝီဟ်ဆွလါသ်နဲ့ ကုရ်အာန်တစ်အုပ်လုံး ရွတ်ဖတ်ဝတ်ပြုမှုအစီအစဉ်ကို ဒီညမှာအဆုံးသတ် လေ့လည်းရှိကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးမှာလည်း မွတ်စလင်မ်အချို့ဟာ လမြတ်ရမဒွါန်ရဲ့နောက်ဆုံး (၁၀) ရက်မှာဗလီဝတ်ကျောင်းတော်အသီးသီးမှာ အိအ်သိကါဖ် လို့ခေါ်တဲ့ ကျင့်စဉ်စခန်းဝင်ရောက်ရင်း လောကီနဲ့ယာယီအဆက်ဖြတ်ပြီး အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာကိုတသခြင်း၊ ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရွတ်ခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ်လေ့လာနှလုံးသွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ ကဒရ်ညဉ့်ရဲ့ သင်္ကေတကို ရှာဖွေလေ့ရှိကြပါတယ်။တမန်တော်မြတ် صلى اله عليه وسلم ကလည်း ရမဒွါန်လဟာ ကုရ်အာန်ရဲ့လဆိုပြီး ဂုဏ်ပြုဖေါ်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပတ်မှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့“ကုရ်အာန်ဘာလဲ”ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုရ်အာန်ဆိုတာ အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်ထံက ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှာရှိတဲ့ လူခပ်သိမ်းအတွက် နောက်ဆုံးနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လမ်းညွှန်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးလူသား နဗီတမန်တော်ချုပ်မုဟမ္မဒ်( صلى اله عليه وسلم)ထံမလာအိကဟ်ကောင်းကင်တမန်စွမ်းအားရှင် ဂျိဗရာအီလ် ကတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ပို့ချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်ဟာ ICTလို့ခေါ်တဲ့ သတင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အလွန်ထွန်းကားတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီဂျီဗရာအီလ်ဆိုတဲ့ အလ္လာဟ့်ရဲ့ဝဟီလမ်းညွှန် ဆက်သွယ်မှုနည်းစနစ်ကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာနဗီတမန်တော်တွေ ကလွဲလို့ အခြားဘယ်လူသားမှဥာဏ်မမီနိုင်ကြပါဘူး။ အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာနဲ့ နှိုင်းရတရားထဲမှာရှိတဲ့ လူသားအကြား အလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဟန့်တားနှောင့်ယှက် ခိုးယူလို့မရနိုင်တဲ့ နည်းစနစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆက်သွယ်ရေး
နည်းပညာဟာ တစက္ကန့်ကို(၁၈၆၀၀၀) မိုင်နှုန်း ပြေးတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပို့ရတဲ့အတွက် ဂလက်ဆီလို့ခေါ်တဲ့ ကြယ်မြို့တော်တစ်ခုကိုဖြတ်ဖို့တောင် နှစ်ပေါင်းသန်းနဲ့ချီပြီးကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အလ္လာဟ့်ရဲ့ ဂျီဗရာအီလ်နည်းကတော့ အလ္လာဟ်ပို့လို့ ရတဲ့သတင်းလမ်းညွှန်ချက်တွေကို သက်ဆိုင်ရာလက်ခံရရှိမယ့် လူသားနဗီတမန်တော် အလင်းပြပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်နှလုံးသားထဲကို သူနားလည်ပြောဆိုနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသား အဖြစ်ချက်ချင်းရောက်ရှိ သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ-တမန်တော်မူစာ (Moses) ထံကို ဟီဗရူးဘာသာစကားနဲ့ရောက်လာတယ်။ တမန်တော်အီစာ(ယေရှုခရစ်တော်) ထံကို အရမစ် (Aramic)ဘာသာစကားနဲ့ရောက်ရှိလာတယ်။ အခုလည်း နောက်ဆုံး လူသားနဗီတမန်တော်ချုပ် မုဟမ္မဒ်(صلى اله عليه وسلم) သခင်ဟာအာရဗ်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးလမ်းညွှန် ကျမ်းဖြစ်တဲ့ ကုရ်အာန်ဟာ အရဗီဘာသာစကားနဲ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုရ်အာန်ကျမ်းဟာ အစအဆုံး တစ်ပြိုင်တည်း ကျရောက်လာတာမဟုတ်ဘဲတမန်တော်မြတ် ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေအလိုက် မက္ကဟ်မြို့မှာ(၁၃)နှစ်၊ မဒီနဟ်မြို့မှာ (၁၀)နှစ် စုစုပေါင်း(၂၃)နှစ်အတွင်းမှာ အလီလီကျရောက်ပြီးမှ ပြီးပြည့်စုံ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (ကုရ်အာန် ၂၆း၁၉၂ ၊ ၄၇း၂ ၊ ၂း၁၈၅ ၊ ၉၇း၁ ၊ ၄၄း၅၈၊ ၄၃း၃)အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်ကိုကုရ်အာန်ကို ရှင်ပြန်ထမြောက်ရမယ့်နေ့တိုင် လူခပ်သိမ်း အတွက် နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်အဖြစ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပေမယ့် မျက်စီမှိတ်ပြီး ယုံကြည်ရမယ်လို့ အဓ္ဓမ မကျင့်သုံးထားပါဘူး။
ကုရ်အာန်ထဲ ပါတာတွေကို စာတွေ့၊ သက်သေလက္ခဏာနဲ့ အလ္လာဟ်ရဲ့ ဖန်ဆင်းမှုသဘာဝတရားကြီးကို လက်တွေ့သက်သေလက္ခဏာတွေအဖြစ် သိပ္ပံ၊ ၀ိဇ္ဖာ၊ နည်းပညာပေါင်းစုံနဲ့ ဆန်းစစ်လေ့လာပြီးမှကျမ်းရှင်နဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဟာ အနှိုင်းမဲ့`တစ်´ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ ထောက်ခံစေပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် ဥာဏ်ကို စာတွေ့ လက်တွေ့ စေစား ပွားများစေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆန်းစစ်လေ့လာပြီး ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုရင် ကုရ်အာန်ကျမ်းစာဟာ အဲဒီယုံကြည်လက်ခံလာသူ (မွတ်စလင်မ်) အတွက်အမှားနဲ့ အမှန်ခွဲခြားတဲ့ မှတ်ကျောက် (ဖုရ်ကာန်အဖြစ် ခံယူကျင့်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် အဲဒီကုရ်အာန်နဲ့ ဆန့်ကျင်တာမှန်သမျှ ယုံကြည်ခြင်း၊ ခံယူကျင့်သုံးခြင်း လုံးဝ ပြုပိုင်ခွင့် မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကုရ်အာန်ဆိုတာ အစ္စလာမ့်ဘ၀ တည်ဆောက်မှုလည်းစဉ်အတွက် အစ္စလာမ့် တရားဥပဒေရဲ့ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ (ကုရ်အာန် ၂း၁၈၅ ၊ ၅း၄၄ ၊ ၁၃း၃၇)ကုရ်အာန်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကုရ်အာန်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာအမည် ကမ္ဘာ့ဘာသာရေး ကျမ်းစာအချို့ရဲ့ အမည်တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာကျမ်းစာထမှဲာ မပါဘဲလူတွေကအမည်ပေးမှည့်ခေါ်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ-သမ္မာကျမ်း (Bible) ဆိုတဲ့အမည်ဟာ သမ္မာကျမ်းထဲမှာ မပါပါဘူး။လူတွေက အမည်ပေး ခေါ်ဝေါ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
`ကုရ်အာန်´ ဆိုတဲ့ကျမ်းရဲ့အမည်ဟာ ကုရ်အာန် ကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်း ဖေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ-(ကုရ်အာန် ၂း၁၈၅ ၊ ၁၂း၂ ၊ ၅၄း၁၇) တွေမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။`ကုရ်အာန´် ဆိုတဲ့ အရဗီဝေါဟာရရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ `ရေွး ချယ်စုစည်းခြင်း၊ အဖန်တလဲလရွဲတ်ဖတ် ခြင်း´ဆိုပြီးရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာထဲမှာ ကမ္ဘာ့ရှေးကျမ်းအသီးသီးရဲ့ အနှစ်သာရတွေ ကိုရွေးချယ်စုစည်း ဖော်ပြထားတဲ့အပြင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ရမယ့် နေ့တိုင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ရေးရာကိစ္စတွေ အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လမ်းညွှန်တွေကို စုစည်းထားတဲ့ နောက်ဆုံးလမ်းညွှန် ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် လူသားတွေအနေနဲ့ ဘ၀လမ်းညွှန်အဖြစ် အဖန်တလဲလဲ ဖတ်ရွတ်လေ့လာနေရမယ့် ကျမ်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းစာတစ်အုပ်တည်းသာ မူရင်းအတိုင်းသန့်စင်စွာရှိနေခြင်း၏အံ့ဖွယ်ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ မတိုင်မီကရရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးကျမ်းစာအသီးသီးဟာ ဒီနေ့ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ မူရင်းအတိုင်း မရှိကြတော့ပါဘူး။ တစ်ချို့ဆိုရင် မူရင်းဘာသာစကားနဲ့တောင် မရှိကြတော့ဘဲ တစ်ချို့ဆိုရင် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီမူရင်းအတိုင်း မဟုတ်တော့တဲ့ကျမ်းကိုကိုင်ပြီး အကြွင်းမဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သစ္စာတရားကို လေ့လာရှာဖွေဖို့ အလွန်ခက်ခဲနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကွဲလွဲချက်တွေ အမြောက်အများ ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကုရ်အာန်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှစ်ပေါင်း(၁၄၀၀) ကျော်ပြီဖြစ်ပေမဲ့မူရင်းအရဗီဘာသာစာပေနဲ့ မူရင်းအတိုင်း ၏သည် မရွေး ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လူမျိုးပဲ ဖတ်ဖတ်၊အသံထွက်ဟာ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံမှာအသံထွက်တစ်မျိုး ကွဲလွဲချက်မရှိတာကို နိုင်ငံ ပေါင်းစုံက ပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာ့ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ ဖတ်ရွတ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မူရင်းအတိုင်း သန့်စင်စွာရှိနေရတဲ့အကြောင်းကတော့--၁။ တမန်တော်ချုပ်မုဟမ္မဒ်(ဆွ)ဟာ နောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်ပြီး သူ့နောက်မှာနောက်ထပ်နဗီတမန်တော်အသစ်ပေါ်ထွန်းစရာမရှိတော့ခြင်း၊ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာဟာ အလ္လာဟ့်ထံက နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လမ်းညွှန်လာစရာမရှိတော့ခြင်းတို့ကြောင့် ကျမ်းရှင် အလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်က ကုရ်အာန်ကျမ်းစာကိုယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ အာမခံထားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ (ကုရ်အာန် ၁၅း၉)၂။
ဒီအပြင်မွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာကိုလက်တွေ့ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ခြင်းနည်းစနစ်သမိုင်းကို ကြည့်ရင် တမန်တော်ချုပ်မုဟမ္မဒ်(صلى اله عليه وسلم) ဆီကို ကုရ်အာန်ကျမ်းစာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကျရောက်လာတိုင်း တမန်တော်မြတ်(صلى اله عليه وسلم)ရဲ့ ကြီးကြပ်မှုနဲ့ စာဖြင့် ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအပြင် လူအများကအလွတ်ကျက်မှတ်ပြီး စိတ်နှလုံးမှာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို တစ်ပြိုင်တည်း ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အပြင်မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို မိမိတို့ရဲ့ နေ့စဉ်(၅)ကြိမ်ဆွလားသ် ၀တ်ပြုမှုမှာ နေ့စဉ်ဖတ်ရွတ် ဆင်ခြင်ခြင်း၊ ဟာဖိဇ်ွခေါ် ကုရ်အာန်ကျမ်းစာကို အစအဆုံး အလွတ်ကျက်မှတ် အာဂုံဆောင် သူများကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပေးနေခြင်းနဲ့ မွတ်စလင်မ် ကျားမမရွေး အမြလဲိုလို ကုရ်အာန်ကို ရွတ်ဖတ်နေခြင်းတို့ကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ရှေးကျမ်းစာအသီးသီးကို ဒီလို ပီပီပြင်ပြင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိတာကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာကို ကမ္ဘာ့ဘာသာစကား အသီးသီးနဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူတွေရဲ့ အရည်အသွေးအလိုက် အယူအဆ ကွဲလွဲချက်အချို့ ရှိနေပေမယ့်ဒီကွဲလွဲချက်တွေကို မှတ်ကျောက်တင် ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ အရဗီစာပေနဲ့ မူရင်းကုရ်အာန် ရှိနေခြင်းဟာ အစ္စလာမ်ရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကုရ်အာန်၏အရဗီဘာသာစာပေ၏အံ့ဖွယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရဗီစကား ပြောတဲ့နိုင်ငံများစွာရှိနေပြိး ဒေသအလိုက် အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုရှိနေပေမယ့်ကုရ်အာန်ကျမ်းစာမှာ သုံးထားတဲ့ အရဗီစာပေကတော့ အားလုံးအတွက် စံနမူနာပြဲဖစ်ပါတယ်။ ဒီ့အပြင် အရဗီဘသာစကားဟာ မပြောပလောက်တဲ့ လူအနည်းငယ်သာ သုံးစွဲနေတဲ့ ဘာသာစကားအသေ (Dead Language)မျိုးလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကမ္ဘာ့လူအများစုသုံးစွဲနေတဲ့ ရှင်သန်နေတဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသာမကဘဲ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများပါ သုံးစွဲနေပြီး အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ကြီးမှာအာရဗီစာပေဌာန သီးခြားထားရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ရုံးသုံးဘာသာစကား (၆) မျိုးအနက် အရဗီဟာ တစ်မျိုးအပါအ၀င်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီ့အပြင် ဒီနေ့ကမ္ဘာရဲ့ သိပ္ပံပညာနဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ စာပေဝေါဟာရတွေကျယ်ပြန့်လာ ချိန်မှာအရဗီစာပေဟာ ခေတ်၊ စနစ်၊ အသိပညာရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အဆင့်မြင့်စာပေတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ- ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ချုပ် (ရာဗိသွဟ်) ကနေပြီး ဒီနေ့ ကမ္ဘာ့သိပ္ပံပညာရပ်အသီးသီးရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပါရဂူ (၁၄) ဦးကို နိုင်ငံအသီးသီးက ခေတ်ခေါ်ပြီး အရဗီကုရ်အာန်ကျမ်း မူရင်းနဲ့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်သခင်(صلى الله عليه وسلم) သြ၀ါဒမှတ်တမ်းထဲက သက်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံ၊ ၀ိဇ္ဇာ နည်းပညာဘာသာ ရပ်အလိုက်အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပေးပြီး လက်တွေ့ နောက်ဆုံးပေါ် ပညာတွေနဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးစေခဲ့တဲ့အခါသုတေသနအဆုံးမှာ ကမ္ဘာ့ပါရဂူအားလုံးက အရဗီကုရ်အာန်ကျမ်းနဲ့ တမန်တော်ရဲ့ သြ၀ါဒ မှတ်တမ်းတွေကိုခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ အံ့ဖွယ်အဖြစ် ချီးကျူး ဂုဏ်ပြု ကြေငြာခဲ့ကြရပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ကုရ်အာန်အပေါ် သုတေသနနဲ့တွေ့ရှိချက်များကို This Is The Truth (သည်မှာသစ္စာတရားတည်း) ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ ဗွီဒိယို၊ ဗီစီဒီခွေများအဖြစ် ကမ္ဘာကိုဖြန့်ချိနေတာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပါရဂူ(၁၄) ဦးထဲမှာ(၁) ဦးကလွဲလို့ ကျန်သူတွေဟာ မွတ်စလင်မ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ အဲဒီအထဲက ယိုးဒယားက ပါမောက္ခ တာဂါစုမ်ကတော့ အစ္စလာမ်ကို လက်ခံလိုက်ကြောင်းကြေငြာသွားခဲပါတယ်။
(မက္ကဟ်နှင့်မဒီနဟ်စူရဟ်)ကုရ်အာန်ကျမ်းစာဟာ မုဟမ္မဒ်သခင်(صلى الله عليه وسلم) သက်တော်(၄၀) ပြည့်တဲ့အခါ အာရေဗျဒေသ၊ မက္ကာဟ်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ ဟီရာ လို့ခေါ်တဲ့ သုတေသန လှိုဏ်ဂူမှာ တရားဆင်ခြင်နေစဉ် အနိုင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်ကကောင်းကင်တမန် ဂျီဗရာအီလ်ကနေတစ်ဆင့် စတင် ထုတ်ပြန်ပို့ချခဲ့တာပါ။ အရဗီပြက္ခဒိန်အရတော့ ရမဒွန်လထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်အများစုကတော့ (၂၇) နေ့ညလို့ မှတ်တမ်းတင်ထား ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ကုရ်အာန် စတင်ထုတ်ပြန်ပို့ချတဲ့ ညကို ကဒရ်ညဉ့်(၀ါ) တိုင်းတာသတ်မှတ်တဲ့ညဉ့်လို့ အလ္လာဟ်က ဂုဏ်ပြုဖော်ပြ ထားပါတယ်။ (ကုရ်အာန်၉၆း၁-၆)။ ဆိုလိုတာက လူတစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ လူအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်စေ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကံကြမ္မာကိုကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ တိုင်းတာသတ်မှတ် လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာမြတ်အလ္လာဟ်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီး ကုရ်အာန်ရဲ့ လမ်းညွှန်အတိုင်း ကျင့်သုံးနေထိုင်ရင် လောကီဘ၀ရော၊မတလွန်ဘ၀မှာပါ အောင်မြင်ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူမဆို အလ္လာဟ်ကိုငြင်းပယ်မယ်၊ ကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ဆန့်ကျင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင် လောကီနဲ့ တမလွန် နှစ်ဘ၀စလုံး ဆုံးရှုံး နစ်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ကုရ်အာန် စတင်ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့အတူ မုဟမ္မဒ်သခင်(صلى الله عليه وسلم)ကိုလည်း နဗီတမန်တော် တာဝန်ကို စတင်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ တမန်တော်မြတ်ရဲ့ မက္ကာဟ်မြို့(၁၃)နှစ်တာ တမန်တော်သက်တမ်း ကိုကြည့်ရင်ဖန်ဆင်းတာလည်းအလ္လာဟ်၊ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နေတာလည်း အလ္လာဟ်၊ တရားစီရင် စစ်ဆေးမှာလည်းအလ္လာဟ်ဆိုတဲ့ အလ္လာဟ်တစ်ပါးတည်းသာ အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာဆိုတဲ့ (သောင်ဟီးဒ်)တရားကို ဟောကြားရတဲ့ အခါအလ္လာဟ်ကိုငြင်းသူတွေ၊ အလ္လာဟ်ကိုလက်ခံပေမယ့် အခြားတစ်စုံတစ်ရာ(နတ်)တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကိုးကွယ် သူတွေကအပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်မှုတွေ ခံခဲ့ရတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မက္ကာဟ်ကာလ ကုရ်အာန်အာယသ်လမ်းညွှန်တွေကိုကြည့်ရင် ယုံကြည်ချက် သန့်စင်ဖွံ့ဖြိုးရေး (Purity of Faith) ကိုဦးစားပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းမှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ကျင့်စဉ်ခန်းတွေ များစွာမတွေ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မဒီနဟ်ကာလ(၁၀)နှစ်ကိုကြည့်ရင်တော့ အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတော် လွတ်လပ်စွာထူထောင်နိုင်ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမှုရေး၊ ပြန်ကြားရေး၊ ဘာသာခြားနဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးစတဲ့ လမ်းညွှန်ဥပဒေတွေ၊ရုပ်နဲ့ စိတ်ဝိညာဉ် သန့်စင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ၀တ်ပြုတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်စဉ်တွေစတဲ့ အစ္စလာမ့် တရားဥပဒေရေးရာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုရ်အာန်အာယသ်များစွာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုရ်အာန်ထဲမှာ ရုပ်နဲ့နာမ်၊ တစ်ဦးနဲ့အများ၊လောကီနဲ့ တမလွန် အားလုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လမ်းညွှန် အားလုံးပါဝင်နေပါတယ်။
တမန်တော်မြတ်(صلى الله عليه وسلم)ဟာ မဒီနဟ်ရောက်ပြီး(၈) နှစ်မြောက် (ဟစ်ဂျရီ-၈ခုနှစ်) မှာ မက္ကဟ်မြို့ကို ငြိမ်းချမ်းစွာအောင်နိုင်ပြီး မဒီနဟ်မြို့မှာပဲ စံမြန်း နေခဲ့ပါတယ်။ ဟစ်ဂျရီ(၁၀) ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးဟဂ်ျ ကျင့်စဉ်ပြုပြီး (တမန်တော်မြတ်နောက်ဆုံး ဟဂ်ျပြုနေစဉ်မှာပဲ ကုရ်အာန်ရဲ့ နောက်ဆုံးအာယသ် (၅း၃) ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်) နောက်အလ္လာဟ့်ကရုဏာတော် ခံယူကာ အလ္လာဟ်ထံ ပြန်ကြွသွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်မြတ်(صلى الله عليه وسلم)ရှိစဉ်ကတည်းက ကုရ်အာန်ကို ချက်ခြင်း စာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အာဂုံဆောင်ကျက်မှတ်ခြင်းတို့နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ကြတဲ့အတွက် တမန်တော်မြတ်(صلى الله عليه وسلم)) မကွယ်လွန်ခင် ကတည်းက ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် အစအဆုံးကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလ္လာဟ်က ကုရ်အာန်ကို တမန်တော်မြတ် ခေတ်လူတွေရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အချိန်နဲ့အားလျော်စွာ ကုရ်အာန်အာယသ်တွေကို ချပေးခဲ့ပေမယ့် ပြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီအစီအစဉ်အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲ ခေတ်တိုင်းအတွက် လမ်းညွှန်ဥပဒေအဖြစ် အသုံး ချနိုင်ဖို့လက်ရှိ အစီအစဉ်အတိုင်း တမန်တော်မြတ်(صلى الله عليه وسلم)) ကိုစီစဉ် စေခဲ့ပါတယ် ဒီ့အပြင် ကျပြီးသလောက် အာယသ်တွေကိုနှစ်စဉ်တမန်တော်မြတ်(صلى الله عليه وسلم)က ရမဒွါန်လရောက်ရင်` လက်ရှိအစီအစဉ်အတိုင်း ရွတ်ဖတ်ပြရပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကုရ်အာန်ကျမ်းစာမှာ စူရဟ်ခေါ် ကဏ္ဍပေါင်း(၁၁၄) ပုဒ်ပါဝင်ပြီး ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကို အာယသ်လို့ခေါ်တဲ့လမ်းညွှန်/သက်သေလက္ခဏာ စာကြောင်းများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ စူရဟ်ခေါ် ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းဟာ အတိုအရှည်မတူကြပါဘူး။ ဥပမာ- အရှည်ဆုံးစူရဟ် အမှတ်-(၂)ဟာ အာယသ်လမ်းညွှန်ပေါင်း(၂၈၆) ပါဝင်ပြီး အတို ဆုံးစူရဟ်ကဏ္ဍအမှတ်(၁၀၈)မှာ အာယသ်လမ်းညွှန်ပေါင်း(၃) ကြောင်းသာပါဝင်ပါတယ်။
ကုရ်အာန်အပေါ်သံသယရှိသကုရ်အာန်အပေါ်သံသယရှိသူများကိုဖိတ်ခေါ်ချက်ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင် ကုရ်အာန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိသူများကို အခုလို လမ်းညွှန် ဖိတ် ခေါ်ထားပါတယ်။“ထို့အပြင် အကယ်၍ အသင်တို့သည် ငါ(အလ္လာဟ်) အရှင်မြတ် ထုတ်ပြန်ပို့ချတော်မူခဲ့သောအရာ (ကုရ်အာန်)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယုံမှားသံသယရှိခဲ့ကြပါလျှင် အသင်တို့သည် ယင်း(ကုရ်အာန်)နှင့် အလားတူ စူရဟ်ကဏ္ဍတစ်ပုဒ်ကိုယူဆောင်လာကြကုန်လော့။
ထို့အပြင် အသင်တို့သည် မှန်သောစကားကိုဆိုသူများဖြစ်ခြဲ့ကပါလျှင် (ယင်းသို့ယှဉ်ပြိုင်ကြရာတွင်) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားယိုင်းပင်းကူညီမည့် သူများကိုလည်း ခေါ်ဆောင်လာ ကြကုန်လော့။သို့သော်အသင်တို့သည် (ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို အတိတ်ကာလတွင်လည်း) မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြ၊(မျက်မှောက်ကာလတွင်လည်း) လုပ်နိုင်ကြသည်လည်းမဟုတ်၊ (နောင်အနာဂတ်တွင်လည်း) အလျှင်း လုပ်နိုင်ကြဦးမည်မဟုတ်ချေ၊ သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် ငရဲမီးကို အသိထားကြလော့။ ယင်း၏ လောင်စာမှာ လူများနှင့် ကျောက်တုံးများဖြစ်ကြပေမည်။ အမှန်တရားကို ငြင်းပယ်ကြသူတို့အတွက် အသင့်ပြင် ထားပြီးဖြစ်ချေသည်” (ကုရ်အာန် ၂း၂၃-၂၄)အခုကမ္ဘာပေါ်မှာ အရဗ်နိုင်ငံတွေထဲမှာ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်တဲ့ အရဗ်များစွာရှိနေကြပါတယ်။
ဒီ့အပြင် ကမ္ဘာလူမျိုးအသီးသီးမှာ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ပေမယ့် အရဗီကျွမ်းကျင်သူ များစွာလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဂျူးတွေဆို ရင်လည်းအရဗီအလွန် ကျွမ်းကျင်သူတွေရှိကြပါတယ်။ အနောက်တိုင်းတက္ကသိုလ်ကြီးတွေ၊ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မော်စကိုတက္ကသိုလ်တွေမှာ အရဗီလေ့လာရေးဌာနကြီးတွေလည်း သီးခြားဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာရဲ့အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကို တုန့်ပြန်နိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိတဲ့အပြင် ကုရ်အာန်ကိုလေ့လာလိုက်ကြတဲ့သူတွေဟာ အမှန်တရားကိုသိမြင်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာခြဲ့ကလို့ အခုဆိုရင် အစ္စလာမ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးပြန့်ပွားနေတဲ့ သာသနာလို့တောင် Jehovah Witness က ဖေါ်ညွှန်းနေပါ တယ်။
အစ္စလာမ်ကို ရန်လိုနေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အစ္စလာမ်နဲ့ တမန်တော်မြတ်(صلى الله عليه وسلم)ကို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြောဆိုရေးသားနေကြမယ့်အစား စာကြောင်း(၃)ကြောင်းလောက် ကုရ်အာန်န့ယှဲဉ်ပြီး ရေးပြနိုင်ရင် ပိုပြီးထိရောက်မှာပါ။ဒါပေမယ့် အလ္လာဟ်က ကတိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ (ကုရ်အာန် ၂း၂၄၊ ၁၅း၉) ဒီအပြင်ကုရ်အာန် ရဲ့ အလင်းရောင်ဟာကမ္ဘာကို လွှမ်းသွားမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ အမှန်တရားမှာ အင်အားရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်၊ ညီအစ်မများအနေနဲ့ ကျွန်တော်မကြာသေးခင်ကတင်ပြခဲ့တဲ့ “ကုရ်အာန်အပေါ်ထားရှိရမယ့်မွတ်စလင်မ်တို့၏တာဝန်များ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဤခေါင်းစဉ်ကို ယှဉ်တွဲလေ့လာပြီး ကုရ်အာန်ကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါ။
သဂ်ျဝီးဒ်ပညာနဲ့ စနစ်တကျ ရွတ်ဖတ်ပါ။ အဓိပ္ပါယ် နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးပါ။အခြားသူများ သိအောင်လည်း ကုရ်အာန်ရဲ့ အသိပညာတွေကို ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဓနနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဖြန့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်း အလ္လာဟ်က(၄) ကြိမ်မေးထားတဲ့ ဒီမေးခွန်းကို ဘ၀မှာ မသေခင်ဖြေဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။“မုချဧကန် ငါအရှင်မြတ်သည် ကုရ်အာန်ကို ကျက်မှတ်တရားရယူရန်အတွက် လွယ်ကူစေတော်မူခဲ့ရာ ကျက်မှတ်တရားရယူသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရှိပါ၏လော”။ (ကုရ်အာန် ၅၄း၁၇၊ ၅၄း၂၂၊ ၅၄း၃၂၊ ၅၄း၄၀)
အလ်ဟာဂ်ျ မုဖ်သီ ဦးမြင့်သိန်း (ငြိမ်းချမ်းလုလင်)
Special thanks to Brother Ko Min Than Win
သူတော်စဉ်များ၏ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော ဆုံးမစကား part...
အိုလမာ-အစ္စလာမ် သာသနာ့ ပညာရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် စားသေ...
မွတ်စ်လင်မ်မောင်နှမများအတွက် အကျိုးရှိသော စာသားမျာ...